မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း – Grab Love Story
န်း အိန်း အိန်း”
သေနတ်သံ သုံးချက်ဆက်တိုက် ကြားလိုက်ရပြီး ခဏအကြာ စိမ်းစိုနေသော တောတန်းလေးထဲက မာန်ဟုန် ထွက်လာတာ ဝင်ဒီ တွေ့လိုက်ရသည်။ မာန်ဟုန့်ပုခုံးထက်မှာ တလုံးပြူး ပန့်အက်ရှင် သေနတ်ကို ထမ်းလာသည်။ လက်တဘက်မှာက ရေဘဲလေးကောင်ကို ခြေထောက်တွေကနေ စုကိုင်လာသည်။ ဝင်ဒီ ကားထဲက ဆင်းသည်။
“မာန် … လေးကောင်တောင် ရလာတယ် … ဟေး”
ဝင်ဒီက မာန်ဟုန့်လက်ထဲက ရေဘဲတွေကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး trash bag အမှိုက်အိတ်အမဲရောင်ထဲ ထည့်ပြီး ကားအနောက်ခန်းမှာ ထည့်လိုက်သည်။ မာန်ဟုန်က ရှော့ဂန်းကို သေနတ်အိတ်ထဲ ထည့်သည်။ သေနတ်အိတ်ကို စောစောက ဝင်ဒီ ထည့်လိုက်တဲ့ ရေဘဲတွေ ထည့်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ် အမှိုက်အိတ်ကြီးဘေး ကားနောက်ခန်းမှာ သေသေချာချာ ထားသည်။
“မာန်ဖိနပ် ပြောင်းလိုက်အုံး မာန့်ဘု(တ်)စ်မှာ ရွှံ့တွေချည်းဘဲ”
ဟုတ်သည်။ ရေဘဲတွေ ကျတာက ရွှံ့နွံတွေ ထူထပ်တဲ့ နေရာမှာမို့ သူ့ဖိနပ်တခုလုံး ရွှံ့တွေပေနေသည်။ ဒါကိုသိလို့ အိမ်ကထွက်ကထဲက သူ ဖိနပ်အပို ယူလာသည်။
“ညနေ နေနေက ဘယ်အချိန် ရောက်မှာလဲ … မ”
သူတို့နှစ်ယောက် ကားပေါ်တက်သည်။ အင်း … ဟိုးတုံးကဆိုရင် မဟာ တောပစ်ဝါသနာ အရမ်းပါခဲ့တဲ့ မိန်းမတယောက်။ အခု ဒီနိုင်ငံရောက်ပြီးနောက် မသည် သေနတ်ကို မထိတော့။
မာန်ဟုန်က အရေးရယ် အကြောင်းရယ် လိုအပ်လာရင် သုံးနိုင်ဖို့ ကျင့်ထားပါ ဆိုပြီး သူ သေနတ်ပစ်ကွင်း သွားရင် ခေါ်ခေါ်သွားပြီး မကို အတင်းအကျပ် ပစ်ခိုင်းကျင့်ခိုင်းသည်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာက လူတိုင်း လူဆိုး စာရင်းဝင် ပြစ်မှုဟောင်း ရှိခဲ့သူတွေက လွဲပြီး သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရှိတာမို့ သေနတ်ပေါများပြီး လူဆိုးသူခိုးတွေမှာလဲ သေနတ်ရှိကြလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့တော့ လေ့ကျင့်ထားသင့်သည်။
မသည် တချိန်က နိုင်းမီလီမီတာ ခါးထိုးထားပြီး ရွှေတြိဂံနယ်မြေ မှာလက်နက်ကိုင်တွေ အများကြီးကို အုပ်ချုပ်လာတဲ့ တနယ်လုံးက ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်ကြရတဲ့ မိန်းမတယောက်။ မသည် ဘဝဟောင်းကို လုံးဝ ဇာတ်မြှပ်လိုက်သည်။ မာန်ဟုန်ကသာ သေနတ် ကိုင်ဆဲ အပစ် လေ့ကျင့်နေဆဲ အမဲပစ် ဘဲပစ် လုပ်နေဆဲ။ ဒီမှာ သေနတ်ကိုင်တာကတော့ မြန်မာပြည် နယ်စပ်ဒေသမှာ တုံးကလို ကိုင်တာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ တရားဝင် ကိုင်ဆောင်တာ။ သူတို့ နှစ်ယောက် ညနေကျရင် ဝင်ဒီရဲ့တူမ နေနေရှိန်း လာမယ်ဆိုလို့ ကင်ကျွေးဖို့ ရေဘဲလာပစ်ကြတာပါ။ နေနေရှိန်းသည် သူတို့နဲ့ မိုင် ၂ဝဝလောက် ဝေးတဲ့ မြို့မှာ သင်တန်းကျောင်းတခု တက်နေသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ သူတို့ရှိရာမြို့ကို လာလည်လေ့ရှိသည်။ မာန်ဟုန်သည် ကားစတီရာရင်ကို ဘယ်လက်နဲ့ ကိုင်မောင်းရင်း ဝင်ဒီ ကမ်းပေးတဲ့ ကော်ဖီခွက်ကို ညာလက်နဲ့ ယူကာ မော့သောက်သည်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကော်ဖီလေး။ မွှေးနေသည်။ အိမ်က ထွက်မလာခင် မ ဖျော်ပြီး ဓါတ်ဘူးနဲ့ ထည့်လာတာ။
လမ်းပေါ်မှာ ကားရှင်းနေသည်။ သူတို့ ရေဘဲ လာပစ်တဲ့နေရာနဲ့ သူတို့နေတဲ့နေရာက သိပ် မဝေးလှဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဒီနိုင်ငံကို ရောက်လာပြီးနောက် နံမည်အသစ်တွေနဲ့ မထင်မရှား မြို့ငယ်လေးတခုမှာ ဇာတ်မြုပ်ကာ နေထိုင်နေကြသည်။ သူတို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒီပြည်နယ်နဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာ နိုင်ငံခြားသား သိပ်မရှိလှ။ အမေရိကန် မျက်နှာဖြူတွေဘဲ များသည်။ မာန်ဟုန့်နံမည်က မောင်မောင် ဝင်ဒီ့နံမည်က မအေး လို့ ဒီနိုင်ငံဝင်လာကထဲက ပြောင်းထားသည်။
သူတို့နှစ်ယောက် ရွှေတြိဂံနယ်မြေမှာ ဆက်မနေဘဲ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ဖို့ ဘဝအသစ်တခု ပြန်စဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ခဏနေပြီး သြစတြေလျားဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန် ဖြစ်ဖြစ် ကို ရောက်အောင်သွားဖို့ ဘယ်နည်းနဲ့ ရနိုင်မလဲ အကြံထုတ် နည်းလမ်းရှာဖွေနေခိုက် ဘန်ကောက်ကို တိုးရစ်စ်အဖြစ် လာသော ဟယ်သာဝိတ်ဖီးလ် ဆိုတဲ့ အမေရိကန်မ တယောက်နဲ့ အရမ်း ချစ်ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီး ဟယ်သာ Heatherရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထဲကို ဝင်ခွင့်ရရှိလာကြပေသည်။ ဟယ်သာဝိတ်ဖီးလ်လဲ မာန်ဟုန်နဲ့ ဝင်ဒီ့ကို သူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ဒီမြို့ငယ်လေးမှာ အခြေချနေထိုင်ဖို့ အစစ ကူညီမစခဲ့သည်။
မဟန်ကတော့ သူတို့ ထွက်လာချိန် နယ်စပ်မှာဘဲ သူလက်ထပ်ပြီး ယူလိုက်တဲ့ သူ့တပည့်ကောင်လေး စိုင်းနွတ်နဲ့ အရင်အလုပ်ဟောင်းကိုဘဲ ဆက်လုပ်ပြီး ကျန်ခဲ့သည်။ ဝင်ဒီက မဟန်ကို ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ထွက်ခဲ့ပါလား ခေါ်ပေမဲ့ မဟန်က တနေ့နေ့တော့ လာမည် ဆိုပြီး လိုက်မလာဖြစ်။ လက်နက်ကိုင်တွေလဲ (ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လက်နက်လဲ) ကုန်ကြသလို ဘိန်းခင်း ဘိန်းချက်စက်ရုံတွေလဲ အစိုးရက စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆင်နွှဲပြီး ရှင်းလင်းပစ်နေတော့ မဟန်တို့ လင်မယားလဲ အရင်အလုပ်တွေကို ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ဟိုတယ်ရီဇော့တခုဝယ်ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည်လို့ သတင်းရရှိလေသည်။ ဝင်ဒီကတော့ မဟန်ကို သူနဲ့ လာနေစေချင်သည်။ မဟန် လာနေမယ်ဆိုရင် အားတအားဘဲလေ။ မဟန်က သူနဲ့အမြဲ အတူတူနေခဲ့တဲ့ အမဝမ်းကွဲတယောက် မဟုတ်လား။ မဟန်က လာချင်သည် ကြိုးစားမည်လို့ ပြောသည်။
“မာန် ညနေကျရင် ဟယ်သာ Heather ရော လာမယ်တဲ့လား”
“ခေါ်တော့ ခေါ်ထားတာဘဲ လာမယ်လို့တော့ ပြောတယ်”
ဝင်ဒီက မာန်ဟုန်ရဲ့ ပုခုံးမှာ ခေါင်းလေးမှီပြီး “ဟယ်သာ ဆီကို မာန် အမြဲ သွားရဲ့လားဟင် သူ လိုတာတွေ အမြဲ လုပ်ပေးပါ မာန်ရယ် သူ့ကြောင့် မတို့ ဒီရောက်ပြီး ခုလို အေးအေးဆေးဆေး နေကြရတာ ဟယ်သာ့ကျေးဇူး ကြီးပါတယ်” လို့ ပြောသည်။
တကယ်တော့ ဘန်ကောက်မှာ ဟယ်သာနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် မိတ်ဆွေ ဖြစ်ကြပြီး ဟယ်သာ အစပ်အချဉ်တွေ စားပြီး အပေါ်လှန်အောက်လျော ဖြစ်သည်။ နေမကောင်းချိန် မာန်ဟုန်နဲ့ ဝင်ဒီတို့က ဟယ်သာ့ကို အရမ်း ပြုစုပေးခဲ့ကြသည်။ ဟယ်သာလဲ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တော်တော်ကြာကြာ အတူတူ ဆက်နေဖြစ်တော့ မာန်ဟုန်နဲ့ ငြိကြသည်။ အိပ်ရာထဲမှာ မိန်းမတွေကို စွဲအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရမည်ကို ကျွမ်းသော မာန်ဟုန်သည် ဟယ်သာကို သူမဘဝမှာ တခါမှမရဘူးတဲ့ (ပြီးခြင်း) တွေဆီကို အကြိမ်ကြိမ် တက်လှမ်းရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ မာန်သည် အိပ်ခန်းထဲက မထွက်စတမ်း နေ့ရော ညပါ ဟယ်သာ့ကို ကျေနပ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဟယ်သာ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ မသည် မာန်ဟုန်နဲ့ ဟယ်သာ ဖြစ်ကြတာကို စိတ်မဆိုးရုံမက သူမလဲ တခါတလေ သုံးပွင့်ဆိုင် (သရီးဆမ်း) ဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ဒီလို နှစ်ယောက်တယောက် ချစ်တလင်းတွေ ခေါ်ခဲ့ကြပြီး ပိုပို ရင်းနှီးချစ်ခင်လာကြသည်။ ဟယ်သာလဲ သူတို့ကို အရမ်း သံယောဇဉ်တွယ်သွားပြီး သူတို့အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချသွားသလို သူတို့သည် ဘဏ်တွေမှာ ငွေတွေ အများကြီး ရှိတာလဲ သိသွားခဲ့တာ မို့ ယူအက်စ်ကို ခေါ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး မတောင့်တင်းသော လူတွေကို ခေါ်ယူတာထက် ငွေကြေးတောင့်တင်းသော လူတွေကို ခေါ်ယူပေးရတာက ပိုမိုလွယ်ကူတာကြောင့် သူတို့ကို ဟယ်သာ ခေါ်ပေးခဲ့လေသည်။ ဒီရောက်တော့လဲ ဟယ်သာနဲ့ အတူတူ မနေကြပေမဲ့ ဟယ်သာရဲ့အိမ်နဲ့ သူတို့အိမ်က တမိုင်တောင် မဝေး။ မာန်ဟုန်သည် ဟယ်သာ့ကို တခြားကိစ္စတွေမှာ ကူညီမစသလို လိင်ကိစ္စမှာလဲ အပျိုကြီးဟယ်သာရဲ့ ဆန္ဒကို အမြဲ ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဝင်ဒီသည် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ရေးကို ကူညီမစခဲ့တဲ့ ဟယ်လင်ကို သူချစ်တဲ့ မာန်ဟုန်ကို ဝေစားမျှစား လုပ်ခဲ့သည်။ အခုလဲ လုပ်နေဆဲ။
ဘန်ကောက်မှာ နေတာက သူတို့အတွက် စိတ်မချရသေးဘူးလေ။ အချိန်မရွေး အရင်က ရန်ညှိုးရန်စတွေကြောင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာ ခံရနိုင်သည်။ မြန်မာပြည်ဘက် က ရဲတွေ ထောက်လှမ်းရေးတွေက လဲ ခြေချင်းလိမ် နေသည် မဟုတ်လား။
ဟယ်သာရဲ့ အကူအညီနဲ့ မာန်ဟုန်နဲ့ ဝင်ဒီတို့သည် လူများများနဲ့ မထိတွေ့ရဘဲ ဝင်ငွေရရှိ နိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာတွေ လုပ်ထားကြတာမို့ အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်ကြသည်။ ဟယ်သာသည် အိမ်တွေ အများကြီး ပိုင်သည်။ သူပိုင်အိမ်တွေကို ငှားစားတာနဲ့တင် ဟယ်သာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေနိုင်သည်။ ဟယ်သာသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး လိုက်လုပ်နေသည်။ မာန်ဟုန်နဲ့ ဝင်ဒီကိုလဲ အိမ်နှစ်လုံး ငှားထားဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဝင်ဒီလဲ အိမ်အနောက်ဘက် ခြံထဲမှာ မနေ့ထဲက ဒိန်ချဉ်တစ်ကားTikka မဆလာ ဆား ငရုတ်ကောင်းနဲ့ နယ်ထားတဲ့ ကြက်သားတွေကို စကင်သည်။ ဟိုး အရင်တုံးက သူ ပစ်ထားပြီး သိမ်းထားတဲ့ ဆတ်သားတွေကိုလဲ ရေခဲခန်း (ဖရီဇာ) ထဲက ထုတ်ထားပြီး မဆလာနဲ့ဒိန်ချဉ်နဲ့ နယ်ထားခဲ့လို့ ဒီဆတ်သားတွေကိုပါ သူကင်မည်။
မာန်ဟုန်က သူပစ်လာတဲ့ ရေဘဲတွေကို အမွေးနုတ်သည်။ ကင်ဖို့ လုပ်သည်။ နေနေရှိန်းက ရေဘဲကင် ကြိုက်သည်။ ဝင်ဒီက ဟယ်သာကို ဖုန်းဆက်ပြီး လာမှာလား မေးသည်။ ဟယ်သာက လာမည်ဆိုလို့ ဝင်ဒီ ဟယ်သာ သောက်နေကျ ၀ိုင်အနီပုလင်း ပြင်ဆင်နေသည်။
ဒီတိုင်းပြည်ကို ရောက်ပြီး သူတို့ နေနေရှိန်းကို လှမ်းခေါ်သည်။ ဟယ်သာဘဲ အစစ ကူညီခဲ့တာပေါ့။ နေနေရှိန်းကို သူတို့ ကျောင်းတက်ခိုင်းသည်။ နေနေရှိန်းနဲ့ မာန်ဟုန် တချိန်က မာန်ဟုန် ရန်ကုန်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတုံး နေနေနဲ့ ညိစွန်းခဲ့ကြတာ ဒီနေ့အထိ ဝင်ဒီသည် တကယ်ဘဲ မသိတာလား မသိချင်ယောင် ဆောင်တာလားတော့ မသိ။ ဘာမှသိတဲ့ပုံ မရှိ။
နေနေရှိန်းသည် ဝင်ဒီအလစ်မှာ မာန်ဟုန့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့လိုသည်လို့ ပြောသည်။ မာန်ဟုန်လဲ ဟိုတုံးက ဝင်ဒီ့ကွယ်ရာမှာတော်တော့်ကို တခြားဆော်တွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ အတိတ်ကို ထားပစ်ခဲ့ပြီး လူသစ် နံမည်သစ် စိတ်သစ်နဲ့ အခြေချနေပြီမို့ လက်တွဲဖေါ် ဝင်ဒီ့အပေါ် သစ္စာမမဲ့ချင်တော့။ ဝင်ဒီသည် မာန်ဟန်ကင်တဲ့ အကင်တွေနဲ့ စားဖို့ သစ်သီးတွေ အခွံနွှာ ခေါက်ဆွဲတွေ သုတ်သည်။ ဟယ်သာသည် ဝင်ဒီ မာန်ဟုန်တို့နဲ့ နေတာများလို့ အတူတူစားနေလို့ မြန်မာ ခေါက်ဆွဲသုတ်လိုဟာတွေ ကြိုက်နေပြီ။ နဂိုထဲက ဟယ်သာသည် ထိုင်းအစားအစာတွေကို ကြိုက်သူ စားသူ ဖြစ်သည်။ အားလုံး ပြင်ဆင်အပြီး နေနေနဲ့ ဟယ်သာတို့ မရောက်လာခင် ရေချိုးဖို့ ဝင်ဒီသည် အိပ်ခန်းထဲမှာ အဝတ်တွေ အားလုံးချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင် ရေဖွင့်သည်။ ရုတ်တရက် အနောက်မှာ လူတယောက် ရောက်နေလို့ ဝင်ဒီ လန့်ဖြန့်သွားသည်။
“အို့ အို ဟင် မာန် … ”
မာန်ဟန်သည် တောက်ပြောင်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဝင်ဒီ့နောက်ပိုင်း အလှအပတွေကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ဝင်ဒီက မာန် ဘာလိုချင်နေသည်ဆိုတာကို ရိပ်မိလိုက်သည်။
“မာန် နေနေနဲ့ ဟယ်သာ လာတော့မှာ မ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ်”
“မာန်လဲ ချိုးမယ် မနဲ့ အတူတူ”
ဝင်ဒီ ဖျတ်ကနဲ သူ့ကိုယ်အရှေ့ဖက် အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်မိတော့ ဟယ် မာန်ရယ် သူ့ဟာကြီး သံမဏိချောင်းကြီးလိုဘဲ မတ်မတ်မာမာကြီး ထောင်နေသည်။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထောင်ထနေတဲ့ မာန့်လိင်ချောင်းကြီးက မတွေ့တာ ကြာလို့လား မသိဘူး။ အရမ်းတုတ်ပြီး ရှည်သလိုဘဲ။ ဝင်ဒီလဲ မာန်ဟုန်နဲ့ ချစ်ပွဲ မဝင်ဖြစ်တာတော်တော် ကြာနေပြီဆိုတာ သတိထားမိသည်။ အင်း … မာန် တောင့်တဆာလောင်နေပြီ ထင်ပါရဲ့။ မာန်ဟုန်သည် ဝင်ဒီ့တင်ပါးကြီးတွေကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး ကိုင်နေသည်။ ပွတ်နေသည်။ ဒီတင်ပါးကြီးတွေကို သူ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်ခဲ့သည်။ ဆုတ်ညှစ်ခဲ့သည်။ ဖန်းကနဲ ဖန်းကနဲ ရိုက်ဘူးခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ ရိုးမသွားဘူး။ အကြိမ်ကြိမ် ကိုင်တွယ် ဘူးပေမဲ့ ထပ် ကိုင်ချင်နေဆဲ။ ကိုင်နေဆဲ။ လှလိုက်တဲ့ ဖင်တုံးတွေ။ ဆားငံရေကို သောက်မိတယ် ဆိုတဲ့ စကားဟောင်းကြီးတခုလိုပေါ့။
ဝင်ဒီ့လက်လေးက သူ့လိင်တန်ကို ဖွဖွလေး လာရောက် ကိုင်တွယ်လိုက်တော့ မာန်ဟုန့်ရင်ထဲ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ဟိုးတုံးက မနဲ့ သူ ချစ်ခဲ့ကြတာတွေ ဖျတ်ကနဲ ပြန်သတိရမိသည်။ ကြက်သီး ဖျန်းကနဲ ထသွားသည်။ ဝင်ဒီသည် မာန်ဟုန်ရဲ့လိင်တန် ထိပ်ဖူးပိုင်းကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည်။ လိင်တန်သည် တစတစ ထွားလာသည်။ မာသထက်မာ ရှည်သထက် ရှည်လာသည်။ ဝင်ဒီ ဒူးလေးတုတ် ထိုင်လိုက်ပြီး သူမ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ ငုံလိုက်သည်။
“အို အာ မ ရယ် … အား”
လိင်တန်ထိပ်ဖူး ချိုင့်ကြားထဲကို ဝင်ဒီ့လျှာလေး ပွတ်လှိမ့်ထိုးမွှေသွားလို့ မာန်ဟန် ဆတ်ဆတ်ခါ သွားရသည်။ မက သိပ်လုပ်တတ်တာဘဲ။ မသည် သူ့လိင်တန်ကို ပညာပါပါ စုတ်ပေးနေတုံးလဲ သူ့မျက်နှာကို အကဲခတ်နေသေးသည်။ သူ ကြိုက်ရဲ့လား ဆိုတာကို သူမ မျက်လုံး တောက်တောက်လေးနဲ့ အကဲခတ်တာ။ ဝင်ဒီလဲ မာန်ဟုန့်ကို ပစ်ပယ်ထားတာ ကြာပြီ။ မာန်ဟုန် ကြိုက်တာတွေကို မပေးတာ မကျွေးတာ ကြာနေပြီ။ မာန်ဟုန်ကလဲ ဝင်ဒီ့ကို အတင်းအကြပ် ဘယ်တုံးကမှ မတောင်းဆိုဘူး။ ဟယ်သာကလဲ မာန်ဟုန်ကို တခါတခါ ခေါ်ခေါ်ပြီး အိပ်သည်။ ဝင်ဒီလဲ သူတို့ကို ဘဝတမျိုး ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ ဟယ်သာကို ကြည်ဖြူသည်။ မာန်တယောက် ဟယ်သာနဲ့လဲ လုပ်ဖြစ်နေမှာပါ ဆိုပြီး ဝင်ဒီ မာန့်ကို လိင်မဆက်ဆံခဲ့တာ ကြာပြီ။ အခုတော့ မာန့်ကို သူကြိုက်တဲ့ အစုတ်အနမ်းတွေ ပေးနေရသည်။ ဝင်ဒီသည် ဟိုးတုံးကလိုဘဲ မာန့်ကို လျာသုံးပြီး ထိထိမိမိ စုတ်ချက်တွေ ပေးမိလိုက်သည်။ မာန် ညည်းတွားပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သူမခေါင်းကို အားမလိုအားမရနဲ့ လှမ်းကိုင်သည်။ ဝင်ဒီလဲ မာန် အရသာ ကောင်းနေမှန်းသိတော့ ပိုပြီးကောင်းအောင် လျှာလေးနဲ့ ထပ် ကလိပေးသည်။
“မ …တော် …တော်ပြီပြီးသွားလိမ့်မယ်”
ဝင်ဒီလဲ သူ ဝင်ဒီ့ ပါးစပ်ထဲပြီးချင်လဲပြီးပါစေ ဆိုပြီး ဆက်စုတ်နေသည်။
“မတော်ပြီ မကို ချစ်ချင်သေးတယ်”
ဝင်ဒီလဲ မာန်ဟုန်ရဲ့ ဖွားဖက်တော်ကြီးကို အစုတ် ရပ်သည်။
“ကဲ ဒါဖြင့် အိပ်ခန်းထဲ သွားစို့”
အိပ်ခန်းထဲက ဝင်ဒီ့ ကုတင်ဆီကိုအရောက် “မာန် အိပ်လိုက် မ အပေါ်က နေမယ်” လို့ ဝင်ဒီက ပြောလို့ မာန်ဟုန် ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် လှဲအိပ်ချလိုက်တော့ ဝင်ဒီ သူ့အပေါ်ကို ခွပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။ ဝင်ဒီ့ လက်တဖက် တင်ပါးအိအိကြီးတွေ ကြား ထောင်ရက်ကြီးရောက်နေတဲ့ မာန်ဟုန့် လိင်တန်ချောင်းကြီးကို ဖမ်းကိုင်လိုက်ပြီး လမ်းမှန်ကို တည့်ပေးလိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးထိန်းပြီး ထိုင်ချလိုက်သည်။ တင်းစီးစီးနဲ့ ဝင်ဒီ့အထဲကို သူ့လိင်တန် ဝင်ရောက်သွားတဲ့ အီဆိမ့်တဲ့ အရသာကြောင့် မာန်ဟုန့်စိတ်တွေ ထောင်းကနဲ ထလာပြီး တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ဆုတ်ညှစ်ကာ အောက်မှ ပင့်ပင့် ပေးပါတော့သည်။
“အာ အာ အင် အင် မာန် မာန်”
ဝင်ဒီလဲ ဖင်ကြီးတကြွကြွ တရမ်းရမ်းနဲ့ မာန်ဟုန့်အပေါ်က မြင်းစီးနေပြီ။ ဝင်ဒီ့ လုံးဝန်းသော ရင်သားစိုင်တွေ တုန်ခါလှုပ်ရမ်းနေသည်။ မာန်ဟန်လဲ သူမ ဖိဖိဆောင့်တိုင်း အောက်မှ ပင့်ထိုးပေးသည်။ သူမ ခါးလေးကနေ ဆုတ်ကိုင်ကာ အားနဲ့ ပင့်ထိုးသည်။
“အင် ဟင် အိုး မာန် မာန် အီး ရှီး”
“မ မ အိုကေလား နာလို့လား”
“ဟင့်အင်း ကောင်းလို့ ကောင်းလို့ မာန်နဲ့ မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပြီကွယ် မာန် မာန် မ ကို ချစ်လားဟင်”
“ချစ်တယ် မ ချစ်တယ် …”
မ အားရပါးရ မြင်းစီးပြီးသောအခါ မာန်ဟုန်လဲ မ ကို ပက်လက်အိပ်စေပြီး မရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး အားမာန် အပြည့်နဲ့ ဆောင့်လေသည်။
“အို အို အို ဆောင့် ဆောင့် တအား ဆောင့် မာန်”
ဝင်ဒီသည် ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောနေသည်။ မာန်ဟုန်လဲ ဆက်တိုက် ဆောင့်ထည့်သည်။ မသည် ဆက်ဆံတိုင်း အရည် အရမ်းရွှဲသည်။ လိင်အင်္ဂါနှစ်ခု ဝင်ထွက် ပွတ်တိုက်တော့ အသံတွေ မြည်သည်။
“မာန် တအား တအား တအား ဆောင့် ဆောင့်”
ဝင်ဒီရဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို တအားဆုပ်ညှစ်ပြီး ဆောင့်ထည့်ရာ ဝင်ဒီ လမ်းဆုံး ရောက်ပြီးသွားသည်။ မာန်ဟုန်လဲ ဆက်တိုက် ဆိုသလို လမ်းဆုံး တက်လှမ်းသွားရသည်။ ခဏမျှ ငြိမ်ကာ နေကြပြီးမှ ဝင်ဒီက “နေနေတို့ ဟယ်သာတို့ လာကြတော့မှာ ရေချိုးကြစို့” လို့ ပြောပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သည်။ ဝင်ဒီရဲ့ အဝတ်မဲ့ အနောက်ပိုင်း မြင်ကွင်း အလှ ကို မာန်ဟုန် ကြည့်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲကို လိုက်ပါ သွားသည်။ မရဲ့ ဖင်တွေက စွင့်ကားတောင့်တင်း လှပဆဲ။
နေနေရှိန်း တိုယိုတာ စီလီကာ ကားလေးနဲ့ ရောက်လာသည်။ နေနေရှိန်းသည် ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြိး သူမကိုယ်ကို အရမ်းဂရုစိုက်ပုံပေါ်သည်။ ကိုယ်လုံး အရမ်းလှနေသည်။ ဝင်ဒီက “နေနေ ညည်း ဘဲရနေပြီလား” လို့ မေးသည်။ နေနေရှိန်းက “ဝက်ကောက်work out လုပ် စာကျက်နဲ့ ဘာဘဲမှ မထားဖြစ်ပါဘူး အန်တီလေးရယ်” လို့ ပြောပြီး အိမ်နောက်ဖေးဘက် ကို လျှောက်သွားသည်။ နေနေရဲ့ ခါးလေးက အရမ်းကစားထားလို့ နေနေ့ခါးလေးက သေးလွန်းပြီး ဘိုက်လေးက ရှပ်နေသည်။ ဒီခါးလေးအောက်က တင်တွေက နေနေ လမ်းလျောက် တဲ့အခါ လှုပ်ခါသည်။ ဗရမ်းဗတာ လှုပ်ခါတာမျိုးတော့ မဟုတ်။ နေနေ့ ပေါင်တန်တွေကလဲ အချိုးကျသည်။ တကယ်တော့ ဝင်ဒီနဲ့ နေနေရှိန်း နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်လုံး ဂရုစိုက် သတိထားသူတွေမို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်လုံးတွေက အရင်လိုဘဲ လှပတောင့်တင်းဆဲ။
မာန်ဟုန် လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက် က သူ မဆလာနဲ့ ဒိန်ချဉ်နဲ့ သေသေချာချာ နယ်ပြီး နှပ်ထားတဲ့ ဆိတ်သား ဒုတ်ထိုးကင် တွေကို ရေခဲသေတ္ထာ ထဲက ထုတ်လာရင် နေနေ သူ့ရှေ့က ဖြတ်လျောက်သွားတော့ နေနေ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ဘေးတိုက် အနေအထားနဲ့ တွေ့လိုက်ရသည်။ နေနေရှိန်းဒီဇိုင်းက အလန်းစားဆိုတာ တွေ့လိုက်သည်။ မာန်ဟုန် အသားကင်တဲ့ ဂရေလ်ပေါ်ကို ဆိတ်သားအတုံးလေးတွေနဲ့ ထိပ်မှာ ကြက်သွန်အနီစိပ်လေး ထိုးထား သည့် ဒုတ်တန်လေးတွေကို တန်းစီပြီး တင်နေချိန် ဝင်ဒီ ရောက်လာသည်။
“မာန် နေနေ့ကို ရေဘဲကင် ကျွေးလိုက်ပါအုံး”
ရေလဲကင်တွေက စောစောထဲက ကင်ထားတာ ဆိုတော့ စားလို့ ရနေပြီ။ နေနေရှိန်းက “ကိုမာန် ဘာ ဘီယာ ရှိလဲ” လို့ မာန်ဟုန် အသားကင်နေတဲ့ နေရာကို လာကြည့်ရင်း မေးသည်။
“ဟင်နီကင် ရှိတယ် ဇင်တောင် ရှိတယ် နောက်ပြီး ကရိုနာအိပ်စရာ ရှိတယ် နေနေ”
နေနေရှိန်း ရေဘဲကင်ကို ဟင်နီကင်ဘီယာနဲ့ မြည်းနေသည်။ ခဏကြာတော့ ဟယ်သာ ရောက်လာသည်။ ဟယ်သာသည် အရင်ကထက် နဲနဲ ဖိုင့်လာသလို ထင်ရပေမဲ့ ပုံတော့ မပျက်သေး။ တင်ပါးတွေ ပိုကြီး ထယ်လာတာ ဖြစ်မည်။ ကြည့်ကောင်းနေဆဲပါဘဲ။ လမ်းလျောက် တဲ့ အခါ မသိမသာ တုန်ခါသွားကြတဲ့ တင်သားတွေကို မာန်ဟုန် တွေကနေရသည်။
“ဟေး အနံ့ တယ်မွှေးပါလား ငါ ဆာလာပြီ ဟိဟိ”
အသားကင်အနံ့က ခြံထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေသည်။
“ဝင်ဒီ မင်းတို့ နှင်းဆီပင်တွေက တော်တော်သန်တာဘဲ လှလိုက်တာ”
“မာန်ဘဲ အားလုံးစိုက် ဂရုစိုက်နေတာဘဲ ဟယ်သာ မင်းအိမ်မှာ မာန့်ကို လုပ်ခိုင်းလေ”
အနောက်ဘက် ခြံထဲမှာ စားကြသောက်ကြရင်း ထိုင်စကားပြောကြတုံး ဖုန်းလာလို့ ဝင်ဒီ ကိုင်လိုက်သည်။ ဝင်ဒီ့မျက်နှာ အရမ်းပျက်သွားတာ အားလုံး တွေ့လိုက်ကြသည်။
“ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ မဟန်ရယ် အင်း အင်း အမြန်ဆုံး လိုက်ခဲ့မယ်”
တခုခုတော့ ဖြစ်ပြီ။ ဟယ်သာ နေနေရှိန်းနဲ့ မာန်ဟုန်တို့ ဝင်ဒီ ဖုန်းချပြီးရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတာ ပြောပြမှာကို စိတ်စောနေကြသည်။ ဟယ်သာသည် မြန်မာစကား နားမလည်ပေမဲ့ ဝင်ဒီ့မျက်နှာ မကောင်းဖြစ်သွားတာ အသံတွေ တုန်ရီလာတာ တွေ့တာနဲ့ တခုခု မကောင်းသတင်းဖြစ်မည် ဆိုတာကို ရိပ်မိသည်။ ဝင်ဒီ စပြောမှာကိုတောင် မစောင့်နိုင်တဲ့ နေနေရှိန်းနဲ့ မာန်ဟုန်က ပြိုင်တူ မေးမိကြသည်။
“ဘာဖြစ်လဲ မ မဟန် ဘာဖြစ်လဲ”
“အန်တီလေး ဘာတွေ ဖြစ်လဲ”
“မဟန် ယောင်္ကျား စိုင်းနွတ် အသတ်ခံလိုက်ရတယ် အရင် ရန်စအဟောင်းတွေဘဲ နေမှာ”
“ဟာ … …”
ဟယ်သာက ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိလို့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ “ဘာတွေ ဖြစ်ကြလဲ” မေးသည်။ နေနေရှိန်းက အကြောင်းစုံ ရှင်းပြသည်။
“ဘယ်လို အသတ်ခံရတာတဲ့လဲ မ”
“ဆိုင်တဆိုင်ထဲက အထွက်ပစ်တာ ကြေးစားဘဲဖြစ်မှာပေါ့ အခုနောက်ပိုင်း ဒီနယ်မြေမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ မရှိတော့ဘူး ထင်တာဘဲ”
ဝင်ဒီက “မာန် မ မဟန်ဆီ လိုက်သွားလိုက်မယ် သူ တယောက်ထဲ အားငယ်နေတယ် ဟိုကဟာတွေ တယောက်ယောက်ကို လွှဲလိုက်ပြီး မဟန်ကို ဒီကို ခေါ်ခဲ့ဖို့ လုပ်မယ် ဟယ်သာ့ကိုလဲ တိုင်ပင်ရအုံးမယ်” လို့ ပြောသည်။ ဟယ်သာကို ဝင်ဒီ ဖြစ်ပျက်တာတွေ ပြောပြသလို မဟန်ကို ဒီကို ခေါ်ယူချင်ကြောင်း ပြောသည်။ မဟန်ကို ဘယ်လို ခေါ်နိုင်မလဲ ဟယ်သာက အကြံများပေးသည်။
“မ ဒါဆို ဘယ်တော့ သွားမလဲ”
“As soon as possible ပေါ့ မာန် အခုဘဲ လေယာဉ်လက်မှတ် ခေါ်မေးမယ်”
“မ အတွက် ကျနော် စိတ်ပူတယ် ကျနော် လိုက်ခဲ့ရမလား”
“ဒီမှာ မာန် လုပ်စရာတွေ ရှိနေတယ် ဟယ်သာနဲ့ ဝယ်မယ် လုပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွေ ကိစ္စရှိနေတာ မ သိတယ် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး မ ပဲ သွားလိုက်မယ်”
“နေ့တိုင်း ဖုန်းခေါ်နော် လိုအပ်ရင် ကျနော် လိုက်ခဲ့မယ်”
ဝင်ဒီ့ကို လေဆိပ်ကို မာန်ဟုန်နဲ့ နေနေရှိန်း လိုက်ပို့ကြသည်။ ဝင်ဒီက ဟိုရောက်တာနဲ့ ဖုန်းခေါ်လိုက်မည်လို့ ပြောသည်။ နေနေရှိန်းကိုလဲ သူ မရှိတုံး လိုအပ်တာရှိရင် မာန်ဟုန့်ကို ပြောဖို့ မှာနေသည်။ ဝင်ဒီ့လေယာဉ်ပျံ ထွက်သွားပြီးနောက် မာန်ဟုန်နဲ့ နေနေရှိန်း လေဆိပ်ကနေ အိမ်အပြန် နေနေရှိန်းသည် မာန်ဟုန့်လက်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး “ကိုမာန် နေနေလေ ကိုမာန်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်နေမိတာ ကြာပြီ” လို့ ပြောပြီး မာန်ဟုန်ရဲ့ ပုခုံးစွန်းမှာ ခေါင်းလေး မှီလိုက်သည်။
“နေလေ ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး ကိုမာန်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်”
“အို နေနေ ရယ်”
နေနေရှိန်းသည် သူ့ကျောပြင်ကို သူမ လက်သဲလေးတွေနဲ့ ဖွဖွလေး ကုတ်ခြစ်သည်။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ မာန်ဟုန် နေနေရှိန်းကို သူ့အခန်းထဲ ခေါ်ခဲ့သည်။ နေနေရှိန်း သိပ်လှနေသည်။ နေနေရှိန်းသည် ဒီတိုင်းပြည်ရောက်ပြီးမှ ကိုယ်လုံး ပိုပေါ်လာသည်။ ပိုပြီး အချိုးကျလာသည်။ တချို့လူတွေက ဒီတိုင်းပြည်ရောက်ပြီး အဆီများတာတွေ ထောပတ် ဒိန်ခဲတွေကြောင့် ပုံပျက်သွားတတ်ကြပေမဲ့ နေနေရှိန်းသည် ၈ျင်မ် မှန်မှန်သွား လေ့ကျင့်ခန်းမပြတ် လုပ်တာကြောင့် ကိုယ်လုံးက ထိပ်တန်း အလန်းစား ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာပြည်မှာတုံးထက်တောင် ပိုကြည့်ကောင်းလာသည်။ မာန်ဟုန်သည် သူ့ရင်ခွင်ထဲ လဲပြိုလာသော နေနေရှိန်းကို ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်လေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိကပ်ခါ စုတ်လိုက်သည်။ နေနေရှိန်းက အငမ်းမရ ပြန်စုတ်သည်။ နေနေရှိန်းသည် နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်နမ်းနေတုံး လက်တွေက မာန်ဟုန့် ဘောင်းဘီက ခါးပတ်ကိုဖြုတ် ဇစ်ကို ဆွဲချကာ ဘောင်းဘီကို ချွတ်သည်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ထပ်ချွတ်သည်။ ဗြောင်းကနဲ ပေါ်ထွက်လာတာက မာန်ဟုန်ရဲ့ စံချိန်မှီ လိင်တန်ကြီး။ နေနေရှိန်း ဒီလိင်ချောင်း လှလှကြီးနဲ့ ကင်းကွာနေတာ ကြာလှပြီမို့ အငမ်းမရဘဲ ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လေသည်။ ပြတ်လပ်နေတာ ကြာလှပြီ။ မာန်ဟုန်လဲ နေနေရှိန်းက ဖျတ်ကနဲ သူ့ရှေ့ ထိုင်ချလိုက်လို့ မာန်ဟန် သိလိုက်ပြီ။ နေနေ သူ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးတော့မည်ဆိုတာ။ သူ့အကောင်ကြီးကလဲ အပါးကြီး။ နေနေရှိန်းလဲ လက်ကလေးနဲ့ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ရော ပိုပြီးတောင် ထွားတက်လာသလိုဘဲ။ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းထောင်ထလာသည်။
“ကိုမာန် နေ နမ်းပေးမယ် နော်”
နေနေရှိန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေး သူ့လိင်တန်ကို ငုံလိုက်ပြီ။ အထဲကို ရောက်တာနဲ့ နေနေရှိန်းရဲ့လျှာက သူ့လိင်တန် ထိပ်ဖူးကြီးကို လာထိတွေ့ကြည်ဆယ်တော့တာဘဲ။
မဟန် အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် လန့်အော်ပြီး ထထိုင်သည်။ သူ အဖေါ်အဖြစ် ခေါ်ထားတဲ့ သူ့ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့ မိန်းကလေး အိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်လာသည်။
“ဆရာမ ဘာဖြစ်လဲ …”
“အိပ်မက် … အိပ်မက်မက်တာ …”
“ကျမ ဆရာမနား လာအိပ်ပေးရမလား …”
“ရတယ် … ကိစ္စမရှိဘူး … ချယ်ရီ … ပြန်အိပ်တော့ …”
အိပ်မက်ထဲ ဟိုညက အဖြစ်အပျက်တွေ ပြန်မက်သည်။ မဟန် အိပ်မက်ထဲ ပြေးတာ အမောဆို့သွားသလို အခုအိပ်ရာထဲ မဟန် တကိုယ်လုံး ချွေးတွေ စိုရွှဲနေသည်။ ဟိုညက ဖြစ်တဲ့အတိုင်း အိပ်မက် ပြန်မက်သည်။
မဟန်နဲ့ စိုင်းနွတ် သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ ဟိုတယ်လေးကို စားသောက်ကုန်တွေ သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် မိတ်ဆွေက ညစာ စားဖို့ ဖိတ်လို့ သူတို့ မြို့လေးက နံမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်ကြီးမှာ သွားစားကြသည်။ နောက်တနေ့ သူတို့ စောစောထရမှာမို့ မိတ်ဆွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ဖို့ ကားရပ်ထားတဲ့ ကွက်လပ်ကို လျှောက်အလာ … လူနှစ်ယောက် ရုတ်တရက် အမှောင်ထဲက ပေါ်လာပြီး စိုင်းနွတ်ကို အနီးကပ် သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်သည်။ စိုင်းနွတ်သည် မျက်နှာကို ပြောင်းဖြတ်ထားတဲ့ ၁၂ဂိတ်တလုံး ထိုးသေနတ်နဲ့ အနီးကပ် ပစ်ခတ်တာ ခံရတာကြောင့် … ဝုန်းကနဲ … မြေပေါ်ကိုလဲကျသည်။
မဟန်သည် ဒီလူတွေ စပစ်ကထဲက ကားနှစ်စီးကြားထဲ ဝပ်လိုက်ပြီး … ပြေးသည်။ သူတို့ ဘိန်း လုပ်ငန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးထဲက သေနတ် မဆောင်တော့။ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း လုပ်နေပြီး အရင်တုံးက လုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြည်ဖုံးကားချပြီး သာမန်လူတွေ ဖြစ်နေပြီ။ မြို့ထဲမှာသွားလာနေကြတာကြောင့် သေနတ်လဲ မလိုအပ်တော့ဟု ထင်သည်။ စိုင်းနွတ်က လိုလိုမယ်မယ် ဆိုပြီး ပစ္စတိုနှစ်လက်နဲ့ အော်တိုမက်တစ် ရိုင်ဖယ်နှစ်လက်ကို အိမ်တနေရာမှာ ဖွက်ထားသည်။ လမ်းသွားရင်တော့ မပါ။ ခုတော့ ကြုံရပြီ။ ရန်သူ … ပေါ်လာသည်။
စိုင်းနွတ်တော့ သေပြီ။ မဟန်ပြေးသည်။ လူနှစ်ယောက်က လိုက်သည်။ အရင်ကဆိုရင် မဟန်သည် ဒီလူနှစ်ယောက်ကို အသေပစ်ပြီးလောက်ပြီ။ အခု သူတို့က လက်နက်နဲ့။ သူမက လက်နက်မဲ့။ နောက်ဖေးလမ်းကြားလေး တခုထဲ ဝင်ပြေးသည်။
“မပြေးနဲ့ … ပစ်လိုက်မယ် …”
ရှမ်းစကားနဲ့ အော်သံ ကြားပေမဲ့ မဟန် အပြေး မရပ်။ အားသွန်ပြေးပြီး ဆိုင်တခုရဲ့ အနောက်ဘက်ပေါက်ကနေ အထဲဝင်သည်။ တံခါးကို အတွင်းက ပိတ်သည်။ ကုန်စုံဆိုင်တခု ဖြစ်နေသည်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို ရဲကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းသည်။
မဟန် ပြန်အိပ်လို့ မရ။
အိပ်ရာက ထသည်။ ခုလောက်ဆိုရင် ဝင်ဒီသည် လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရှိနေမည်။ မဟန်သည် အိမ်ထဲမှာဘဲ အဖေါ်နဲ့ နေနေသည်။ ဟိုတယ်အလုပ်ကို မန်နေဂျာနဲ့ဘဲ လွှဲထားသည်။ စိုင်းနွတ် ဖွက်ထားသော သေနတ်များ မဟန် ပြန်ထုတ်ခါ အသင့်ထားထားသည်။ ရန်ကြွင်းရန်စ ဖြစ်မည်။ ဘယ်သူလဲ။ ရန်သူ ဘယ်သူလဲ။ ဟိုတုံးက ဘိန်းချက်စခန်း တုံးက ရန်သူဟောင်း ဖြစ်ဖို့များသည်။ အဲဒီည မှာဘဲ မဟန် အရင်တုံးက တပည့်ဟောင်းတယောက် ဖြစ်တဲ့ ခွန်ထွန်းမောင်ကို ဖုန်းဆက် ခေါ်သည်။ ခွန်ထွန်းမောင်သည် အရင်လိုဘဲ တပည့်တပန်းတွေနဲ့ ရှိနေတုံးဘဲ။ ခွန်ထွန်းမောင် ချက်ချင်း မဟန်ဆီ ပြေးလာသည်။
“ဆရာမ … ဘာမှ မပူနဲ့ … ကျနော် ဒီကိစ္စ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ ဆိုတာ စုံစမ်းမယ် … ဆရာမဝင်ဒီ လာရင်လဲ ကျနော်ဘဲ လေဆိပ် ဆင်းကြိုပေးမယ် … အစစ စိတ်ချပါ … ဆရာမတို့ အရင်က ကျနော်တို့အပေါ် ကောင်းခဲ့တာတွေ မမေ့ပါဘူးဗျာ …” လို့ ပြောသည်။
ဝင်ဒီသည် လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့ သူ မာန်ဟုန့်ကို မခေါ်ခဲ့တာ မှားများမှားသွားပြီလားလို့ စဉ်းစားနေသည်။ အရင်တုံးကလို ဝင်ဒီ စိတ်မပြင်းထန်တော့။ ဘဝဟောင်းကို ထားခဲ့ပြီး ဘဝသစ်တခုကို နံမည်သစ်နဲ့ ပြန်စနေတာ ကြာပြီ။ မာန်ဟုန်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်နေပြီး မာန်ဟုန် တိုက်တွန်းတာတောင် သေနတ် ပစ်ခတ်တာတွေ ဝင်ဒီ မလုပ်ချင်တော့။ ခုတော့ မဟန်ကြောင့် အရင်နယ်မြေကို ခြေဦးလှဲ့ခဲ့ရပြန်ပြီ။ ဘယ်သူများ … စိုင်းနွတ်ကို သတ်ပစ်ပြီး မဟန်ကို ဖမ်းခေါ်ချင်သလဲ။ ဝင်ဒီသည် လူသစ် စိတ်သစ် နံမည်သစ်နဲ့ နေနေပြီမို့ သူမကို ဒီအီးအေလိုအဖွဲ့၊ အင်တာပို နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်တဲ့ ရဲများ ခြေရာခံမိပြီး အရင်ဘဝဟောင်းက ဘိန်းဘုရင်တဆူရဲ့ တူမဆိုတာ သိသွားမှာလဲ စိုးသည်။ ခက်တာက မဟန်ကို သူမ သံယောဇဉ် ကြီးသည်။ မဟန်သည် ဝင်ဒီ့အပေါ် အရမ်း အနွံအတာခံ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တဲ့ အမဝမ်းကွဲလဲ ဟုတ် … ရဲဘော်ရဲဘက်လဲ ဖြစ်တော့ … သူမ ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ မျက်နှာလွှဲခဲပစ် မလုပ်ချင်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြေကြီးကို ဝင်ဒီ ပြန်နင်းရပြန်ပြီ။ လေဆိပ်မှာ ခွန်ထွန်းမောင် လာကြိုနေသည်။ ခွန်ထွန်းမောင်သည် အရင်အတိုင်းဘဲ။ မဟန် အရေးကြုံလို့ ခွန်ထွန်းမောင် လာကူညီပြီလို့ ဝင်ဒီ သိလိုက်သည်။ အင်း … လူဟောင်းတွေထဲက အရေးကြုံရင် ရောက်လာသေးတာ ဝင်ဒီ ဝမ်းသာနေသည်။ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ခွန်ထွန်းမောင်က ဝင်ဒီ့လက်ထဲကို သေနတ်တလက် လာထည့်ပေးသည်။ ဝေါ်လ်တာပီပီကေ အမျိုးအစား ၉ မီလီမီတာ ပစ္စတို တလက်။ ဂျိန်းစ်ဘွန်းဒ်ကိုင်သော သေနတ်အဖြစ် ထင်ရှားသော ဒီသေနတ်ကို ဝင်ဒီ မကြိုက်။ သို့ပေမဲ့ ဝင်ဒီ ဘာမှမပြောဘဲ စလင်းဘက်အိတ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်သည်။
ခွန်ထွန်းမောင်က ဝင်ဒီနဲ့ မာန်ဟုန် ယူအက်စ်ကို ထွက်သွားပြီးနောက် ဘာတွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေ ပြောပြနေသည်။ ဝင်ဒီသည် ဒါတွေကို စိတ်မဝင်စားတော့ပေမဲ့ မဟန်ကိစ္စမှာ သူမ ဒါတွေကို သိထားမှ ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာ ကူညီနိုင်မည်ဆိုပြီး ခွန်ထွန်းမောင် ပြောတာတွေကို သေသေချာချာ နားထောင်လေသည်။ ခွန်ထွန်းမောင်နဲ့ ဝင်ဒီတို့ စကားတပြောပြောနဲ့ မဟန်အိမ်ကို မောင်းလာခိုက် အနောက်မှာ ကားတစီး ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါလာတာ ဝင်ဒီ သတိပြုမိသည်။ ခွန်ထွန်းမောင်ကို ပြောပြတော့ … “ကျနော့်ကောင်လေး တွေပါ ဆရာမ … လိုလိုမယ်မယ် ကျနော် လိုက်ခိုင်းထားတယ် …” လို့ ရယ်မောရင်း ပြောသည်။
မဟန် … ဝင်ဒီ့ကို ဖက်ပြီး ငိုသည်။
“ရှောင်မဲ့ … ဟိုတုံးက ခေါ်တုံးကသာ ငါ ယူအက်စ်ကို လိုက်ခဲ့ရင် ခုလို စိုင်းနွတ် သေမှာ မဟုတ်ဘူး … ငါ့ကြောင့် … ငါ့ကြောင့်ပါ …”
“ဖြစ်ပြီးတာတွေက ဒို့ ပြန်ပြင်လို့ မရတော့ဘူး … မဟန် … ဒို့ ရှေ့ဘာဆက် လုပ်ကြမလဲဘဲ စဉ်းစားကြရအောင် … မဟန် …”
ခွန်ထွန်းမောင်တို့ ပြန်သွားကြပြီးနောက် မဟန်သည် သူမနဲ့ စိုင်းနွတ်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဝင်ဒီ့ကို အားလုံး ပြောပြသည်။ သူမ ရစရာရှိတာတွေ တာချီလိတ် … မယ်ဆိုင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဘန်ကောက်က အမျိုး … မိတ်ဆွေတွေဆီက ကောက်ခံယူပြီး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ဟိုတယ်ကို ရောင်းပြီး ဝင်ဒီ့နောက်ကို လိုက်မည်လို့ ပြောသည်။ ဝင်ဒီက မဟန်ကို သူနဲ့ မာန်ဟုန်မှာ ငွေကြေး အလုံအလောက် ရှိနေပြီးမို့ ဒီထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိတာတွေကို ရသလောက်ဘဲ ယူခဲ့ပြီး သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောသည်။
“မဟန် … စိုင်းနွတ်လဲ သေပြီ … မဟန်ကို ဝင်ဒီ အဆုံးရှုံး မခံချင်တော့ဘူး … အမြန်ဆုံး ဒီနယ်မြေကနေ ပြေးသင့်ပြီ”
မဟန် စဉ်းစားနေသည်။ ဝင်ဒီ ပြောသလို အားလုံးထားရစ်ခဲ့ဘို့ဆိုတာကလဲ တန်ဖိုးက နဲနဲနောနော မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ငွေတွေ အများဆုံး ရင်းထားတဲ့ တာချီလိတ်ကို ဝင်ဒီနဲ့ သွားပြီး ရနိုင်သမျှ သွားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဝင်ဒီ ဒီနယ်မြေကို တသက်လုံး ခွဲခဲ့ပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ အခု မဟန်ကြောင့် ပြန်ရောက်ရပြန်ပြီ။ ဝင်ဒီလဲ မြန်မာပြည်ဘက်ကမ်းကို ပြန်မသွားချင်တာနဲ့ မဟန် တွေ့ဆုံရမဲ့ ဦးစိုင်းမောင်ကို မယ်ဆိုင်ဘက်ခြမ်းကို ခေါ်လိုက်သည်။ ဦးစိုင်းမောင်က မဟန်ကို ငယ်ငယ်ထဲက ပေါင်းလာသော မောင်နှမဝမ်းကွဲများ ဖြစ်တာမို့ မဟန်ကို ပေးစရာများကို တပတ်အတွင်း ပြန်ပေးမည်လို့ ကတိပေးသည်။ ဝင်ဒီ့ကို ပြန်တွေ့ရလို့လဲ အရမ်းအံ့သြနေသည်။ ဦးစိုင်းမောင် ပြန်သွားပြီးနောက် မဟန်နဲ့ ဝင်ဒီ ဟိုတယ်မှာဘဲ ထမင်းစားကြသည်။
မှန်ကျယ်ပြူတင်းပေါက်ကြီးမှ မြန်မာပြည်ဘက်က မီးရောင်တွေကို ဝင်ဒီ ငေးမောရင်း မဟန်ထည့်ပေးသော ၀ိုင်ဖန်ခွက်ကို ယူသောက်သည်။ မာန်ဟုန့်ကို သတိရနေမိသည်။ ဟိုးတုံးက သူတို့ စခန်းကြီးထဲ နေခဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံး ပြန်ပြောင်း သတိရနေသည်။
“ဟင် … မဟန် …”
“ကိုမာန့်ကို ဘာလို့ ခေါ်မလာတာလဲ …”
“ဟိုမှာက သူကြည့်ရတဲ့ အလုပ်တွေ ရှိနေတယ်လေ … သူပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် … ဝင်ဒီ ဒီလောက် မြန်မြန် ဒီကို လိုက်ခဲ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး … တယောက်ယောက်နဲ့ အိမ်ရော … အလုပ်တွေရော အပ်ရမှာ …”
“နေနေ တယောက်ရော … ရှောင်မဲ့တို့နဲ့ အမြဲတွေ့တယ် မဟုတ်လား …”
“အင်း … တွေ့တယ် … သူ့ကိုလဲ ကျောင်းထားပေးထားတယ် … မကြာခင် … နေနေ ကျောင်းပြီးပြီး အလုပ်ဝင်ရင်လဲ ဝင်ဒီတို့ဘက်မှာဘဲ ခေါ်ထားမှာ …”
“မဟန် ယူခဲ့မဲ့ ငွေတွေလဲ ဝင်ဒီနဲ့ကိုမာန်ဘဲ ရင်းနှီးပေးပေးပါ … အတူတူဘဲ နေမယ်နော် …”
“မဟန်ရယ် … ဝင်ဒီနဲ့ တသက်လုံး နေခဲ့တာဘဲဟာ … မဟန် ဒီမှာကျန်ခဲ့တာ … စိတ်မှမဖြောင့်ဘဲ …”
သူတို့ စကားတပြောပြောနဲ့ သူတို့နေတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းကို ပြန်လာကြသည်။ ကပ်ပြာလေး ထိုးထည့်ပြီး တံခါးကို ဖွင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ကို လူတချို့က သေနတ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းချိန်ထားတာ တွေ့လိုက်လို့ ဝင်ဒီလဲ သူမ စလင်းဘက်အိတ်ထဲက ခွန်ထွန်းမောင် ပေးထားတဲ့ ပစ္စတိုကို ဆွဲထုတ်သည်။ ဂျိုင်းကနဲ အသံနဲ့အတူ ဝင်ဒီ ရှေ့ကို မှောက်ရက်လဲသွားသည်။ အနောက်က လူတယောက်က အေကေ၄၇ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ဒင်နဲ့ ဝင်ဒီ့ဇက်ပိုးကို ထုချလိုက်လို့။ မဟန်ရဲ့ခေါင်းကို ဘေးတဖက်တချက်က လူနှစ်ယောက်က သေနတ်များနဲ့ ထောက်ထားသည်။ ဝင်ဒီ လူးလဲထသည်။ လူနှစ်ယောက်က ဝင်ဒီ့ခေါင်းကို သေနတ်များနဲ့ တေ့ထားလိုက်သည်။ ဆိုဖါပေါ်ထိုင်နေသူက ထရပ်လိုက်သည်။
“မင်းတို့ ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ ဒို့သိလို့ … ကြည့်စမ်း … လူ ၁ဝယောက်နဲ့ လာဖမ်းတာ … အားလုံး အော်တော်မက်တစ်တွေနဲ့ချည်းဘဲနော် … မပစ်ရဲဘူးလဲ မထင်နဲ့ … ကဲ အသာတကြည်ဘဲ ဒို့ခေါ်ရာကို လိုက်ခဲ့တော့ …”
“နင်တို့ ဘယ်သူတွေလဲ … ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ …”
“လေသံက မာလှချည်လား … ဒေါ်ဝင်ဒီ … ခင်ဗျားဟာ တချိန်က ဒီနယ်မြေမှာ ဗိုလ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုပေမဲ့ အခု အခြေအနေတွေက ပြောင်းနေပြီ … ဟင်းဟင်း … ခင်ဗျားမှာလဲ နောက်လိုက် မရှိတော့ဘူးဗျ … ဟားဟား…”
ရန်သူတွေက ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ရဲ့ ပါးစပ်တွေကို တိတ်တွေနဲ့ ကပ်ပိတ်လိုက်ပြီး … ခေါင်းကို ခေါင်းအုံးစွပ်လို အနက်ရောင်အိတ်တွေနဲ့ စွပ်လိုက်ကြသည်။
“ကဲ … သွားစို့ …”
ဟိုတယ်ရဲ့ အနောက်ဘက် … လှေခါးလေးကနေ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ခေါ်ထုတ်သွားသည်။ ဟိုတယ် အနောက်ဘက်မှာ စောင့်နေတဲ့ အလုံပိတ်ဗင်ကားတစီးထဲ တက်ခိုင်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ သုံးနာရီခန့် မောင်းပြီးသောအခါ သူတို့ရဲ့စခန်း ရှိရာကို ခြေလျင်လျှောက်ကြရပြန်သည်။ ခေါင်းကို အိတ်ကြီးစွပ်ထားပြီး လက်ပြန်ကြိုးကလဲ တုပ်ထားလို့ ဘေးက သူတို့က တွဲခေါ်ပေးရသည်။ ခရီးမတွင်လှ။
“ကဲ ရောက်ပြီ …”
မီးရောင်ထိန်လင်းနေတဲ့ အဆောက်အဦးထဲ ရောက်တော့ ခေါင်းမှာ စွပ်ထားတာတွေ ဖယ်ဖွင့်ပေးသည်။ လက်နောက်ပြန် တုပ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကိုတော့ မဖြုတ်ပေး။ သူတို့ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက လူငယ်တယောက်ဘဲ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ မျက်နှာရှည်ရှည်နဲ့ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ လူရွယ်တယောက်။ ပြောက်ကြား ပုံဖျက် ယူနီဖေါင်းကို ဝတ်ထားသည်။ ခါးမှာ အိတ်နဲ့ ပစ္စတိုတလက်ကို ချိတ်ထားသည်။ သူ့ဘေးမှာ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကိုင် အစိမ်းပုတ်ရောင် ယူနီဖေါင်းဝတ်တွေ။ အားလုံး လေးယောက်။
“သိနေတယ်လေ … မဟန်ကို ထိရင် ဝင်ဒီ ရောက်လာမယ်ဆိုတာ … အခု တခါထဲနဲ့ နှစ်ယောက် ရတာဘဲ…အင်း … ဝင်ဒီ့ကို ထိရင် မာန်ဟုန်လဲ နေမှာမဟုတ်ဘူး … မကြာခင် သူ့ကိုလဲ ကျုပ်တို့ရမှာဘဲ … သုံးယောက်လုံးဆုံမှ … အရင်က ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းတာတွေအတွက် တရားစီရင်ရမယ် … ဂျပ်မင့်ဒေးပေါ့ … အရင်ဆုံး မာန်ဟုန်ကို ရံပုံငွေလေး တောင်းရအုံးမယ် … သူ့ ချစ်မမကို ထိရင် သူ မခံနိုင်ပါဘူးလေ …”
“မာန်ဟုန် လာရင်တော့ အရှိန်အဟုန်က ပြင်းထန်လိမ့်မယ် … ငါတို့ကို ရလိုက်သလိုတော့ လွယ်မယ် မထင်ဘူး … နင်တို့ အားလုံးကို သူ ရက်ရက်စက်စက် သတ်မှာ…”
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူသည် စီးကရက်တလိပ်ကို ထုတ် မီးညှိသည်။
“အင်း … ဝင်ဒီ … ဝင်ဒီ …မာန်တွေ ရှိတုံးပါလား …ခင်ဗျား သိဖို့က အခုခင်ဗျားက ကျုပ် လက်ခုပ်ထဲမှာ … ကျုပ်ကို ဒီလို လေသံနဲ့ မပြောနဲ့ … ကျုပ် စိတ်ဆိုးလာရင် … မလွယ်ဘူး…”
“သတ်လိုက်လေ … သေရဲတယ် …”
“သတ်တာထက် ဆိုးဝါးတာတွေနဲ့ ညှင်းဆဲမှာ … ဟင်းဟင်း …လေသံ နဲနဲချလိုက် …”
မာန်ဟုန်သည် နေနေရှိန်း ပြန်သွားပြီးနောက် ဟယ်သာခေါ်လို့ ဟယ်သာရဲ့ အိမ်မှာ ရောက်နေသည်။ ဝင်ဒီ မရှိတုံး ဟယ်သာ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ကာမဆန္ဒတွေကို မာန်ဟုန် ဖြည့်ဆည်းပေးလေသည်။ အခုလဲ ဟယ်သာအလုပ်က ပြန်လာပြီး မာန်ဟုန်နဲ့ အရက်နဲနဲ သောက်ကြပြီး ဟယ်သာက မာန်ဟုန့်ကို စတင် နမ်းစုပ်လာသည်။ ဟယ်သာသည် ဆံပင်ကို ယောင်္ကျားတယောက်လိုဘဲ တိုတိုလေး ညှပ်ထားသည်။ ဟယ်သာ့ပုံစံက သမင်တကောင်ကို လိုက်တော့မဲ့ ကျားသစ်မတကောင်လိုဘဲ။ အားမာန် အပြည့်နဲ့။ ဂျိုင်းပြတ်စွပ်ကျယ်ကို အတွင်းခံမပါဘဲ ဝတ်ထားတာကြောင့် ဟယ်သာရဲ့ ရင်သားထိပ်သီးလေးတွေက စွပ်ကျယ်သား ပါးပါးမှာ ထင်းထင်းကြီး မြင်နေရသည်။ စွပ်ကျယ်က တိုတိုလေး။ ဟယ်သာ့ဝမ်းပျဉ်သား ဖွေးဖွေးတွေကို တွေ့နေရသည်။ အောက်မှာက ဘောင်းဘီ အတိုအပြတ်လေးနဲ့။ ဟယ်သာနဲ့ နမ်းစုတ်နေစဉ် ဟယ်သာ့ လက်တဖက်က မာန်ဟုန့် ပေါင်ဂွကြားကို လာစမ်းနေသည်။ တယ်လီဖုန်း အသံ … မြည်လာသည်။ ကွစ်ကျီ … ကွပ်ကျီ …နဲ့။ မာန်ဟုန် နှုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်ပြီး ဖုန်းထူးလိုက်သည်။
“ဟလို…” “ကိုမာန်လား … ကျနော် ခွန်ထွန်းမောင်ပါ …” “အိုး …ကိုထွန်းမောင် … ပြော …” “ကိုမာန် … ဆရာမဝင်ဒီနဲ့ မဟန် … လူတစု ဖမ်းသွားတာ ခံလိုက်ရတယ် …” “ဗျာ … ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ … ဘယ်မှာလဲ …” “မယ်ဆိုင်က ဟိုတယ်တခုမှာ … မဟန် ရစရာ သွားတောင်းရင်း ဖြစ်တာ … ကျနော်က လိုက်ခဲ့မယ် ပြောတာ သူတို့က လက်မခံဘူး …” “တောက်…….ဘယ်အဖွဲ့လဲ … ဘယ်ကောင် လုပ်တာလဲ … သိပြီလား …” “သိပြီ … ခေါင်းဆောင်က ဗိုလ်ရှမ်းလေးတဲ့ အရင်က လွယ်မွေဘက်က စိုင်းအုံကြာအဖွဲ့က … မဝင်ဒီနဲ့ မဟန် မသေစေချင်ရင် … ဒေါ်လာ၁သန်းနဲ့ လာရွေးဖို့ စာပို့တယ် …” “ဘယ်တော့ လာရွေးရမှာတဲ့လဲ …” “တပတ်အကြာ …တဲ့” “ကိုထွန်းမောင် … ကျနော် လာခဲ့မယ် …” “ဟုတ် …ကိုမာန် …”
ဖုံးချလိုက်တာနဲ့ … “ဘာဖြစ်လဲ မာန် … ဝင်ဒီ ဘာဖြစ်လဲ …” လို့ ဟယ်သာ မေးသည်။ “ဝင်ဒီကို တောတွင်းက ကောင်တွေ ဖမ်းသွားကြပြီ … ဟယ်သာ…” “အိုး … ဒါကြောင့် ငါ ဝင်ဒီ့ကို မသွားဖို့ တားသေးတယ် … ခက်တာဘဲ … ဘဝဟောင်းကို ပြန်မသွားသင့်တော့ဘူး …” “ငါ လိုက်သွားမယ် … ဟယ်သာ…” “အင်း … လိုက်ရမှာပေါ့ … ငါလဲ လိုက်ခဲ့မယ် … မာန် …” “မလိုက်နဲ့ ဟယ်သာ … အန္တရာယ်များတယ် … ငါတို့ ပြန်လာမှာပါ …” “ငါလဲ မင်းတို့နဲ့ အတူ ၀ိုင်းလုပ်မယ်လေ …” “ရတယ် … မလိုက်ပါနဲ့ …”
မာန်ဟုန် … နေနေရှိန်းဆီကို ဖုန်းဆက်သည်။ နေနေရှိန်းက လိုက်ခဲ့မည် ပြောသည်။
“မလိုက်နဲ့ နေနေ … အန္တရာယ်ကြီးတယ် …ကိုယ်ဘဲ မနဲ့ မဟန်ကို ရအောင် ပြန်လိုက်ခေါ်ခဲ့မယ် …”
မာန်ဟုန် နောက်တနေ့ လေယာဉ်နဲ့ လိုက်သွားသည်။ စိတ်ထဲမှာ လေးပင်နေသည်။ ဟိုတုံးကလို မဟုတ်ဘူး။ ဟိုတုံးက ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရင်ဆိုင်ပစ်ခဲ့သည်။ အခု ဘဝအေးချမ်းပြီ ဆိုပြီး … ထင်ထားပြီးခါမှ … အရင် ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေဟောင်းကို ပြန်ရောက်ရပြီ။ လေဆိပ်မှာ ခွန်ထွန်းမောင် လာကြိုနေသည်။
“ကိုမာန် … လိုအပ်တာတွေ ကျနော် ကြို ပြင်ဆင်ထားတယ် …”
ခွန်ထွန်းမောင်နဲ့ အတူ လူ ၅ယောက် ပါလာသည်။ မာန်ဟုန့်ကို ၁နာရီလောက် ကားနဲ့ ခေါ်ခဲ့ပြီး အိမ်တလုံးထဲ ခေါ်သွားကြသည်။ “ကိုမာန် … ဒီမှာ လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ ကျည်ကာအင်္ကျီ၊ မိုင်းအမျိုးမျိုး … လိုတာယူပါ …” “ဘယ်နေရာမှာ ချိန်းလဲ … ကျနော့်အထင်တော့ ငွေလိုချင်တာ တခုထဲတော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး … ကျနော်တို့ကို လက်စားချေချင်တာလဲ ပါလိမ့်မယ် …”
ခွန်ထွန်းမောင်က ငွေလာပေးဖို့ နေရာကို ပြောပြသည်။
“ဒေါ်လာ၁သန်း ဘယ်လိုရမလဲဗျာ …ဘာနဲ့ ပေးရမယ် ပြောလဲ …” “ဒါကတော့ တန်ဖိုးညီတဲ့ ရွှေချောင်း … ပေးရင် ရလိမ့်မယ် …”
မာန်ဟုန် သေနတ်များကို ကြည့်သည်။ AR-15…AK47 …နဲ့ UZI မောင်းပြန်များနဲ့ 45 ပစ္စတိုလ်များ … 357 ခြောက်လုံးပြူးများ။ အစ္စရေးနိုင်ငံလုပ် ဒဲဇက်အီးဂဲလ် ပွိုင့်ဖိုးဖိုက် တလက်ကို ကောက်ယူသည်။ AK47 တလက်နဲ့ ကျည်ကပ်တွေ ယူသည်။ သံပုရာသီးနဲ့ တူသော လက်ပစ်ဗုံးလေးများ ယူသည်။ ခွန်ထွန်းမောင်က … “ကျနော်နဲ့ ကျနော့်လူတွေလဲကိုမာန်နဲ့အတူ ပါမယ် … လိုတာပြောပါ … ခိုင်းပါ …” လို့ ပြောသည်။
ရှမ်းလေး … ဂျော်နီဝါကား ဘလူးလေဘာ အရက်ကို ဆတ်သားခြောက်နဲ့ မြည်းနေသည်။ သူ့ စားပွဲပေါ်က 555 စီးကရက်ဘူးထဲက စီးကရက်တလိပ်ကို ထုတ်ယူကာ မီးညှိ ရှိုက်သောက်လိုက်သည်။ ရှမ်းလေး … ဝစ်စကီကို အရသာခံသောက်ရင်း … ဝင်ဒီနဲ့ မဟန် … မာန်ဟုန်တို့ကို လှလှပပ လက်စားချေဖို့ စဉ်းစားနေသည်။ အရင်ဆုံး … ဒီဆော်နှစ်ယောက်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ကျင့်ပစ်လိုက်ရင် ကောင်းမည်။ ပြီးမှ ရက်ရက်စက်စက် ညှင်းပမ်းပြီး သတ်ပစ်မည်။ ဟိုခွေးမသား မာန်ဟန် ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလဲ ကောင်းကောင်း လက်တုံ့ပြန်ရမည်။ ဟိုးတုံးက ဒီကောင် သိပ်ထောင်ခဲ့သည်။ ဝင်ဒီ့အရှိန်နဲ့ သူက ဝင်ပြီးစွာခဲ့သည်။ ဒီကောင့်ကို ကြည့်မရတာ ကြာခဲ့ပြီ။ ရှမ်းလေး … ဟိုတုံးက ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ပြန်စဉ်းစားတော့ ဒေါသတွေကြီးလာသည်။ သူတို့အဖွဲ့က ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်တို့အဖွဲ့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လမ်းက ဖြတ်လုခဲ့သည်။ မကြာခင် … ဝင်ဒီ … မဟန်နဲ့ မာန်ဟုန်တို့ သူတို့စခန်းကို ဝင်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီး သူတို့ခေါင်းဆောင် စိုင်းအုံကြာကို ဝင်ဒီတို့ ဖမ်းခေါ်သွားသည်။ ရှမ်းလေးရဲ့အဖေ တိုက်ပွဲမှာ ကျသည်။ ထိုစဉ်က ရှမ်းလေး အရမ်းငယ်သည်။ တေးထားသော ရန်ညှိုးရန်စကို သူ အကောင်ကြီးလာသောအချိန်မှာ ပြန်လက်စားခြေဖို့ လုပ်တာဘဲ။
ဝင်ဒီသည် သူတို့ခေါင်းဆောင် စိုင်းအုံကြာကို အပြစ်ဒဏ်ပေးတာ ဆိုပြီး လံကွတ်တီဘဲ ဝတ်စေပြီး သူတို့ စိုက်ခင်းများမှာ ရေလောင်း ခိုင်းထားတာ အကြာကြီး။ ခြေထိပ်ခတ်ထားလို့ စိုင်းအုံကြာလဲ ဘယ်ကိုမှ မပြေးနိုင်။ အခုတော့ နံမည်ကြီး ဝင်ဒီသည် သူ့စခန်းမှာ အကျဉ်းသားဘဝ ရောက်နေပြီ။ မဟန်ရော … ဝင်ဒီရော …ကိုယ်လုံးတွေက ပျံနေဆဲဘဲ။ ဝင်ဒီဆိုတဲ့ ကောင်မကို ချရရင် သေပျော်ပါပြီလို့ သူတို့ ရွှေတြိဂံနယ်မြေက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပြောပြောနေတာ သူ ကြားနေရတာ ကြာပြီ။
သူ ဝင်ဒီ့ စွင့်ကား တောင့်တင်းတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး ဝင်ဒီ့ကို မုဒိန်းကျင့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်။ အခု စဉ်းစားနေတာနဲ့တောင် သူ့ ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော်က မတ်ချင်နေပြီ။ စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ သူ့ကိုးမမ ပစ္စတိုလ်ကို ခါးက သားရေအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်သည်။ ပြောနေကြာတယ်။ ခုဘဲ သွားဖြုတ်မယ်။ ထိုင်ရာက ထလိုက်ချိန် သောက်ထားတဲ့ စကော့ဝစ်စကီ အရှိန်ကြောင့် နဲနဲယိုင်သည်။ “ကိုရှမ်းလေး …” “ဟာ … ကျားဖြူ … ချစ်လေး …” သူ့အခန်းဝမှာ ကျားဖြူမ …။ ကျားဖြူမသည် အစိမ်းပုတ် ပြောက်ကြား ယူနီဖေါင်းနဲ့ လက်ထဲမှာ Ak47 အတို တလက်ကိုင်လာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် … သူ့ဆီကို ဝင်လာမဲ့လူက လက်နက်ကိုင်လာခွင့် မရှိဘူး။ ကျားဖြူမက သူ့ဆော်မို့ မတားကြတာ။ ကျားဖြူမသည် အခုနောက်ပိုင်း သူတို့ ရွှေတြိဂံနယ်မြေဒေသမှာ သူ့အဖွဲ့လိုဘဲ အင်အားကြီးမားလာတဲ့ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့သမီး အကြီးဆုံး။ ကျားဖြူမသည် အသက်ကြီးလာသော ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့နေရာမှာ ခေါင်းဆောင်နေရာ ဝင်ယူခဲ့တာ မကြာသေး။ ကျားဖြူမအဖွဲ့နဲ့ သူ မဟာမိတ် လုပ်ထားသည်။ လုပ်ရခြင်းအကြောင်းက တခြားမဟုတ်။ ကျားဖြူမနဲ့ သူ ညိနေလို့။ လက်နက်ဝယ်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတမြို့ကို သွားရင်း ကျားဖြူမနဲ့ သူ တွေ့ဆုံ … ချစ်ကြိုက်မိသည်။ တချို့အလုပ်တွေကို ကျားဖြူမအဖွဲ့နဲ့ သူ ပူးပေါင်းလုပ်သည်။ ကျားဖြူမနဲ့ သူ ချစ်သူ ဖြစ်သွားတော့ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး အင်အား ပိုကြီးမားလာသည်။ ကျားဖြူမက သူစောစောက ထိုင်နေတဲ့ ခွေးခြေလေးပေါ်ကို သူ့ကို ပြန်ထိုင်စေသည်။ သူ ထိုင်ကျသွားပြီး ကျားဖြူမကို မော့ကြည့်သည်။ ကျားဖြူမက သူ့အပေါ်ကို ခွထိုင်လိုက်သည်။ မျက်နှာချင်း နီးကပ်သွားသည်။
“လွမ်းလား …” “အရမ်းပေါ့ …”
သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ကျားဖြူမ နှုတ်ခမ်းတို့ ပူးကပ်ထိတွေ့ စုတ်နမ်းမိကြသည်။ ကျားဖြူမက သူမ အင်္ကျီကို ကြယ်သီးများ ဖွင့်ဖြုတ်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းစုတ်နမ်းတာတွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကြမ်းလာသည်။ အငမ်းမရတွေ ဖြစ်လာသည်။ ကျားဖြူမ လက်တွေက ရှမ်းလေး လက်တွေကို ဆွဲကိုင်ပြီး သူမ ရင်သားတွေ အပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်သည်။ ရှမ်းလေးလဲ တင်းမာဖီးထနေတဲ့ ရင်စိုင်ထွားထွားတွေကို ဆုတ်နယ်နေသည်။ သူတို့လျှာတွေ လူးလှိမ့် လိမ်ယှက်နေ ကြသည်။ အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းလာသည်။ ရှမ်းလေးလဲ ကျားဖြူမကို ခါးကနေဆွဲမပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိတဲ့ ကုတင်လေးဆီကို ခေါ်လာသည်။ ကျားဖြူမရော ရှမ်းလေးရော သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အဝတ်တွေ အားလုံးကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်ကြသည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်တွေနဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်ကြတော့ ကျားဖြူမက စပြီး … ရှမ်းလေးရဲ့ ပေါင်ကြားက တန်းတန်းကြီး ထောင်ထနေတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို လက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ကာ ငုံစုတ်လိုက်သည်။ ရှမ်းလေးရဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူးကို ကျားဖြူမလျှာက ပတ်ခြာလှည့် ထိုးပွတ်ပေးနေသည်။ ရှမ်းလေး … တအားအား … ညည်းကာ … ထိလွန်းလို့ ကျားဖြူမ ခေါင်းကို ဆုတ်ကိုင်ထားနေမိသည်။ ကျားဖြူမ လိင်တန် အရင်းအထိ ငုံလိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး လျှာနဲ့ ကစားပေးသည်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စုတ်ယက်ပေးမှုတွေကြောင့် ရှမ်းလေး … တအားကောင်းတက်လာပြီး….ပြီးခါနီး … ဖြစ်လာရသည် ….။ အား….အား….အား … ကျားဖြူမက အားရပါးရ ဆက်ကလိပေးနေတုံးမို့ … “ချစ်လေး….တော်….တော်ပြီ …” လို့ ရှမ်းလေး တားသည်။
ဒီတခါက ရှမ်းလေး အလှည့်။ ကျားဖြူမရဲ့ ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေ ကြားထဲ ခေါင်းထိုးသွင်းကာ … ကျားဖြူမရဲ့ ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သူ့လျာကြီးနဲ့ ဖိဖိယက်ပေးလေတော့ … ကျားဖြူမလဲ … တအား.အား…အော်ဟစ် နေရသည်။ ရှမ်းလေး လျာကြီးက သူမ အဖုတ်အတွင်းထဲကို ထိုးမွှေနေသည် …။
“ဟိတ် …တော် … တော်ပြီ …သူများ …မနေနိုင်တော့ဘူး …သူများကို … ချစ်ပေးတော့ …”
ဗိုလ်ခွန်မိုင်း … သမီးကျားဖြူမ လွှတ်လိုက်တဲ့ တပည့်ဟူးကောင်းဆီက ကြားရတဲ့ သတင်းကို မယုံကြည်နိုင် ဖြစ်နေသည်။ ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ကို သူ့သမက်လောင်း ရှမ်းလေးက ဖမ်းထားသည် ဆိုတာ။ ဝင်ဒီတို့ ကောင်းစားတုံးက ဗိုလ်ခွန်မိုင်းတို့က သူတို့ကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ရသည်။
“ဟားဟားဟား…မာန်ဟုန် မကြာခင် ရောက်လာမှာဘဲ … တခု ရှိတာက မာန်ဟုန်ကို ဒီကောင်မ နှစ်ယောက်လို အရှင်ဖမ်းလို့တော့ ရချင်မှရမယ် … ရှမ်းလေးကို သတိပေးရမယ်… … ရှမ်းလေးက … မာန်ဟုန့်အကြောင်း သေသေချာချာ သိချင်မှသိမယ် … မာန်ဟုန်က သေရမှာ မကြောက်ဘဲ … တဇွတ်ထိုး တိုက်ခိုက်တဲ့ကောင် …”
ဟူးကောင်းက … ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်နေပြီး …
“ဗိုလ်လုံ … မပူနဲ့ဗျ … ဗိုလ်ရှမ်းလေးက လျင်ပါတယ် … မာန်ဟုန် သူ့လက်ထဲ ကားကားကြီး ကွိကနဲ မိမှာပါ … ခု မာန်ဟုန်ကို ဒီကိုလမ်းပြအဖြစ် ခေါ်လာမဲ့ ခွန်ထွန်းမောင်တို့က ဗိုလ်ရှမ်းလေးလူတွေဘဲ …” “ဟေ …ဟုတ်လား … ပိုင်လှချည်လား …ရှမ်းလေး … ဒီလောက် လျင်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး … ကောင်းကွာ…”
ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့ ဇနီးမယား ရှယ်လီ … သူတို့အတွက် စားစရာတွေ လာချသည်။
“ကဲ … ဟူးကောင်း … စားကွာ …ငါ့မိန်းမက ထိုင်းမ ဆိုတော့ ထိုင်းဟင်းတွေက ထိပ်တန်းဘဲကွ … တုန်ရန်းယိုးဒယားဟင်းချိုနဲ့ သင်္ဘောသီးသုတ် … ငါးခူကို ပင်စိမ်းရွက် … ငရုပ်သီးစိမ်းနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ငါးဟင်း …” “အရမ်းကောင်းပေါ့ … ဗိုလ်လုံ …”
ရှယ်လီသည် သူတို့ဘေးမှာ ရပ်ခါ ပြုံးနေသည်။ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ ကြာပြီ။ ရှယ်လီ မြန်မာစကား ကောင်းကောင်း နားလည်သလို ကောင်းကောင်း ပြောတတ်နေပြီ။ သူတို့ ရှေ့မှာ ပြုံးနေပေမဲ့ ရှယ်လီ့ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေသည်။ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရော ဟူးကောင်းရော မသိကြတာက ရှယ်လီသည် ဗိုလ်ခွန်မိုင်းနဲ့ မရခင်က တာချီလိတ် တဖက်ကမ်း မယ်ဆိုင်မြို့ဘက်ခြမ်းမှာ ကြက်ဆီထမင်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့ မာန်ဟုန်က ချစ်စနိုး (ဆိုင်းမီးစ်ကက်) လို့ ခေါ်တဲ့ ရှယ်လီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ဆိုတာပါဘဲ။ မာန်ဟုန်ကို ရှယ်လီ သိပ်ချစ်ခဲ့သည်။ မာန်ဟုန်နဲ့ ကွဲခဲ့ရပေမဲ့ သူ့ကို ချစ်တဲ့ စိတ်တွေဟာ ခုထိစွဲမြဲနေဆဲ။ ကျားဖြူမသည် ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့ ပထမ မိန်းမက ပါလာတဲ့ သမီး။ ရှယ်လီနဲ့ ကလေးမရ။ ရှယ်လီ … မာန်ဟုန့်အတွက် အရမ်း စိတ်ပူနေသည်။ သူတို့ မာန်ဟုန်ကို ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်ပြီး သတ်ပစ်ကြမှာ ရှယ်လီ မကြည့်နိုင်ဘူး။ ခွန်ထွန်းမောင်ဟာ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား လုပ်နေတယ် ဆိုတာ မာန်ဟုန့်ကို ပြောမှ ဖြစ်မည်။ မာန်ဟုန် ဘယ်မှာလဲ။ ဗိုလ်ရှမ်းလေးတို့ဆီ သူ မရောက်ခင် ရှယ်လီ တားမှ ဖြစ်မည်။ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းကို ရှယ်လီ သူ့အမဆီ ချင်းမိုင်ကို ခဏသွားမည်လို့ ပြောလိုက်သည်။
“သွား … သွား … ငါ့မိန်းမ … မင်း မရှိတုံးသာ … မင်းညီမ အငယ်ဆုံးလေး … ငါ့ကို ဟင်းချက်ပေးဖို့ ထားခဲ့ …”
မာန်ဟုန်သည် မနက်ဖန် ငွေတသန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ ရွှေချောင်းတွေနဲ့ မဟန်နဲ့ ဝင်ဒီ့ကိုသွားလဲလှယ်ဖို့ တကယ်တော့ သဘောမကျ။ ရန်သူသည် သူတို့ကို အခုလို လုပ်တာ အရင်က ရန်ကြွေး တခုခုကြောင့် လုပ်တာ ဖြစ်မည်။ ဘယ်လောက်ဘဲ သူတို့လိုတာ ပေးပေး သူတို့ကို ပြန်လွှတ်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူ … ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ကို ငွေတသန်း ပေးလဲ တခုခု လုပ်မှာဘဲ။ ဒါကြောင့် ပြန်မလွှတ်မဲ့ အတူတူ ဘာမှ ပေးမနေဘဲ ရန်သူရှိတဲ့ နေရာကို ရှာပြီး ခြေမှုန်းပစ်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မည်လို့ တွေးနေသည်။
ခွန်ထွန်းမောင်တို့က သူနဲ့အတူ လိုက်မယ် လုပ်နေသည်။ ဒါကို မာန်ဟုန် မကြိုက်။ သူ တယောက်ထဲ ရန်သူစခန်းကို သွားပြီး ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ကို ကယ်ထုတ်ချင်သည်။ သူ မနက်ဖန် တောထဲတောင်ထဲမှာ ရန်သူနဲ့ အပေးအယူလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်။ သူ လိုအပ်တာ တချို့ဝယ်ဖို့ အပြင်ထွက်ဖို့ လုပ်တော့ ခွန်ထွန်းမောင်က သူ့တပည့်တယောက်ကို သူနဲ့ အဖေါ်ထည့်နေသည်။ ခွန်ထွန်းမောင် တကယ်ဘဲ စေတနာနဲ့ ကူဖို့ အဖေါ်ထည့်တာလား … သူ့ကို မျက်ခြေမပြတ်စေဖို့ လူထည့်တာလား … သူ မသင်္ကာ ဖြစ်မိသည်။ သူ ရှိနေတဲ့ မဟန်အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ စူပါမားကက်တခုမှာဘဲ မနက်ဖန် တောထဲမှာ အရေးပေါ်လိုတာတွေ သုံးဖို့ ပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝယ်သည်။ ခွန်ထွန်းမောင်ရဲ့ တပည့် အိုက်ပုကို ဝယ်ပြီးသား ပစ္စည်းထုပ်တွေ ကုန်တိုက်အောက်က ကားပေါ်ကို သွားတင်ခိုင်းလိုက်ပြီး အမဲလိုက်ဓါးကောင်းကောင်းတချောင်းကို ဘယ်ဆိုင်မှာ ရနိုင်မလဲ ဆိုင်ရောင်းတဲ့ မိန်းမကို ထိုင်းဘာသာနဲ့ မေးနေဆဲ သူ့ပုခုံးကို တယောက်ယောက်က ပုတ်ပြီး ခေါ်လိုက်လို့ လှဲ့ကြည့်လိုက်သည်။ သူ့မျက်စိတွေကို သူ မယုံနိုင်။ အိပ်မက်များလား။ သူတွေ့လိုက်ရတာက သူနဲ့ ကွဲကွာခဲ့တဲ့ မယ်ဆိုင် ကြက်ဆီထမင်းဆိုင်က ဆိုင်းမီးစ်ကက်လို့ သူက ချစ်စနိုး နံမည်ပေးခဲ့သည့် ရှယ်လီ။
“ဟာ…ရှယ်လီ …” “မာန် …” “ဘယ်က ဘယ်လို …” “လာ … မာန် … အရင်ဆုံး … စိတ်ချရတဲ့ တနေရာကို သွားရအောင် …”
ရှယ်လီသည် အရင်ထက် နဲနဲလေး မဆိုစလောက် ပြည့်လာသလို ထင်ရသည်။ တင်ပါးတွေကကို ကြီးထယ်လာသလိုဘဲ။ ပြန်တွေ့ကြရသေးတယ် ဆိုင်းမီးစ်ကက်ရယ်။ ရှယ်လီသည် သူ့ကို ကုန်တိုက် အနောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ မီးလောင်ရင် ဆင်းပြေးဖို့ ထားတဲ့ ကြောင်လိန်လှေခါးကနေ အောက်ကို ခေါ်သွားသည်။ ကုန်တိုက် အနောက်ဘက်မှာ ရပ်ထားတဲ့ ဗင်ကားအနက် တစီးပေါ်ကို တက်စေသည်။ ကားထဲမှာ အသက်၂ဝကျော်လောက် ကောင်မလေးတယောက် ကားမောင်းသူနေရာမှာ ရှိနေသည်။
“သူက ရှယ်လီ့တပည့်မလေးဘဲ … သူဘဲ မဟန်အိမ်ကို ရှာပေးတာ … အားကိုးရတယ် … သေနတ်လဲ ကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ် … နန်းကြာတဲ့ …”
အရင်ဆုံး … သူ့ကို ပြောလိုက်ပြတာက … ခွန်ထွန်းမောင်တို့ဟာ ရန်သူ ဗိုလ်ရှမ်းလေးဘက်က ဆိုတာဘဲ။
“မာန် … သူတို့ဆီက ရတဲ့ သေနတ်တွေကိုလဲ မယုံနဲ့ … မာန် ပစ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး … တခုခု လုပ်ထားတယ် … ဒါကြောင့် … ရှယ်လီ … မာန့်အတွက် … ဒီမှာ ရှာလာခဲ့တယ် …” “ထင်တော့ ထင်သားဘဲ … ဒီကောင်တွေ တခုခုတော့ တခုခုဘဲလို့ …”
ကားနောက်ခန်းမှာ ကင်းဘတ်အိတ် အနက်ရောင်ကြီးနဲ့ ထည့်လာတဲ့ အမ်ဖိုး အော်တိုမက်တစ် ရိုင်ဖယ်နဲ့ ပစ္စတိုလ်သေနတ်များကို ပြသည်။
“မာန် … တောထဲမှာ ရှမ်းလေးတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့က သူတို့က လူသိပ်များတာဘဲ … မာန် မလွယ်ဘူး ထင်တယ် … ရှယ်လီတို့ ထိပ်တိုက် Head on ဝင်တိုက်တာထက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်း ရှာဖို့ လိုလိမ့်မယ် …” “အင်း … အရင်ဆုံးက နှစ်ဘက်ခွပြီး သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား လုပ်နေတဲ့ ခွန်ထွန်းမောင်တို့ကို မာန်တို့ ရှင်းပစ်ရလိမ့်မယ် … ရှယ်လီ … ခုမရှင်းလဲ နောက်တော့ ရှင်းရမှာ မဟုတ်လား …”
ရှယ်လီက သူမ ယူလာတဲ့ အိတ်ကြီးထဲက အသံထိန်းပြောင်းပို တချောင်းကို ထုတ်ပေးသည်။
“ဒါဆို မာန် ခွန်ထွန်းမောင် တပာ့် အိုက်ပုနဲ့ မဟန်အိမ်ကို ပြန်လိုက်သွားမယ် … သူတို့ကို အရင် ရှင်းပစ်ရမယ် … ရှယ်လီ မဟန်အိမ်ကို သိလား … နောက်တနာရီလောက်ကြာရင် လိုက်ခဲ့မလား …”
“မဟန်အိမ်ကို ရှယ်လီ အရင် ချောင်းနေခဲ့တာ … မာန် စူပါမားကက်ကို ထွက်လာတော့ အနောက်က နောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့တာ … ကောင်းပြီ … မာန် … ပြန်တွေ့မယ် . .”
မာန်ဟုန် ကားပေါ်က ပြန်ဆင်း … ဟိုတယ်ပေါ် ပြန်တက် … ဓါတ်လှေခါးက ဆင်းပြီး အိုက်ပု စောင့်နေသော ကားဆီကို သွားသည်။
“ဟေး … အိုက်ပု … မင်း … စောင့်ရတာ ကြာသွားလား . .” “မကြာပါဘူး အာစရိ … ကျနော်လဲ ညတုံးက အိပ်ပျက်လို့ ခဏမှိန်းနေတာ …” “ကဲ သွားစို့ …” “ကိုမာန် … လိုတာ အားလုံးရခဲ့ပြီလား …” “အင်း ရခဲ့ပြီ … မနက်ဖန်ကျရင် ကျနော်တယောက်ထဲသွားမယ် … ခင်ဗျားတို့ မလိုက်ခဲ့နဲ့ …” “ဟာ … မဟုတ်တာကြီး …ကိုမာန် … သူတို့က အများကြီး …ကိုမာန် ခံသွားရမှာပေါ့ …ကိုမာန် လမ်းလဲ သိမှာ မဟုတ်ဘူး …” “မဟုတ်ဘူး …ကိုမာန်က နိုင်ငံခြား ထွက်သွားပြီး … ဒီက လမ်းတွေနဲ့ အထာတွေ မသိတော့ဘူး … ကျနော်တို့ပါမှ ဖြစ်မယ် … ရှင်းရှင်း ပြောမယ်ဗျာ … ဒီကိစ္စမှာကိုမာန် ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူး …ကိုမာန်က နောက်လိုက် … ကျနော်က ခေါင်းဆောင် … ဟုတ်ပြီလား … သဘောပေါက် …”
ခွန်ထွန်းမောင်သည် ပြောရင်း ဇာတိရုပ်ပေါ်လာသည်။ မင်းသားခေါင်းစွပ် ကျွတ်သွားပြီ .။ ဘီလူးရုပ် ပေါ်ထွက်လာသည်။
“ဒါကို သဘောမတူဘူး ဆိုရင်ကော … ခွန်ထွန်းမောင် … မာန်ဟုန် အကြောင်း ခင်ဗျား မသိသေးဘူးနဲ့ တူတယ် …” “ထွတ် … မင်းက ဘာကောင်မို့လဲ … မင်းက ဘာမှ မဟုတ်ဘူး … ဝင်ဒီ့ကို မှီပြီး ထောင်နေတဲ့ကောင် …” “ခွန်ထွန်းမောင် … မင်းစကားတွေ လွန်နေပြီ …” မာန်ဟုန်က သူ့ခါးကြားထဲထိုးထားတဲ့ ပစ္စတိုကို ထုတ်လိုက်သည်။ ခွန်ထွန်းမောင်က တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်ပြီး … “လုပ်မနေနဲ့ … သေနတ်တွေက ပစ်လို့ မရတဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက်တွေ …” လို့ ပြောသည်။ မာန်ဟုန်ကို သူ ပေးထားသော သေနတ် ထင်နေလို့။ မာန်ဟုန်လဲ ရှယ်လီ ပေးထားသော အသံထိန်းပြောင်းပိုကို ထုတ်ပြီး တပ်ဆင်လိုက်သည်။ ခွန်ထွန်းမောင်ကို ချိန်ရွယ်လိုက်သည်။
“ခွန်ထွန်းမောင် … မင်းကိုမင်း လည်လှပြီ မထင်နဲ့ … ငါ့ကို ရန်သူလက်ထဲ ထိုးရောင်းဖို့ အကြံပက်စက်တဲ့ မင်းကို အရှင်မထားဘူး …”
ခွန်ထွန်းမောင်လဲ သူ အသံထိန်းပြောင်းပို မပေးခဲ့လို့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသည်။ သူ့လူတွေက အထဲခန်းမှာ ရှိနေသည်။ အပြင်မှာက အိုက်ပု ကားနားမှာ ရှိနေသည်။ ခွန်ထွန်းမောင် မိုက်မိုက်မဲမဲ လှုပ်ရှားလိုက်သည်။ သူ့ခါးမှာ ထိုးထားသော သေနတ်ကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ မာန်ဟုန်က ချိန်ထားပြီးနေတဲ့ လူ။ ဖြောက်ကနဲ … လက်ခုပ်တီးလိုက်တဲ့ အသံမျိုး ကြားလိုက်ရပြီး ခွန်ထွန်းမောင် ခေါင်းက နားထင်တခြမ်း ပဲ့ထွက်သွားသည်။ ဝုန်းကနဲ ကြမ်းပြင်ကို ပြုတ်ကျသော ခွန်ထွန်းမောင်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကြောင့် အတွင်းခန်းက သူ့တပည့်သုံးယောက် ပြေးထွက်လာသည်။ စိန်သန်း၊ မြမောင်နဲ့ စိုင်းနေဝင်း။ ဒီလောက် ဖြစ်ပျက်မယ် ထင်မထားကြလို့ သေနတ်တွေကိုယ်စီ ရှိကြပေမဲ့ ခါးမှာ ထိုးထားနေဆဲ။ မာန်ဟုန်က သေနတ်ချိန်ထားရက်ကြီး ရပ်နေပြီး သူတို့ ခေါင်းဆောင် ခွန်ထွန်းမောင် မှောက်ရက်ကြီး လဲနေတာတွေ့တော့မှ သေနတ်များ ဆွဲထုတ်လိုက်ကြသည်။ သူတို့ နောက်ကျသွားပြီ။
မာန်ဟုန်ရဲ့ သေနတ်က ၄၅ဘို့ ဟောလိုးပွိုင့် ကျည်များ ဆက်တိုက် ခုန်ကန်ထွက်လာကြသည်။ စိန်သန်းနဲ့ မြမောင်ရဲ့ နဖူးမှာ ဘောက်ကနဲ … ဘောက်ကနဲ ထိမှန်သည်။ စိုင်းနေဝင်းက မိုက်မိုက်မဲမဲ သူ့သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပစ်ရန် ကြိုးစားသည်။ မာန်ဟုန်က လက်ဦးသွားသည်။ စိုင်းနေဝင်း ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ မာန်ဟုန် ပစ်တဲ့ ကျည်ဆံများ … ထိမှန်သွားပြီး စိုင်းနေဝင်းလဲ သူ့အဖေါ်တွေ နောက်ကို လိုက်သွားသည်။ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ခွန်ထွန်းမောင်တို့ လူစုကို ရှင်းပစ်လိုက်နိုင်ပြီ လို့ ကျေနပ်နေတဲ့ မာန်ဟုန် … အနောက်က အသံ ကြားလိုက်ရသည်။ အိမ်အပြင်က အိုက်ပု ဝင်လာတာ။
“လက်ထဲက သေနတ်ချလိုက် …”
မာန်ဟုန်ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ရွယ်ကာ အိမ်ထဲ ဝင်လာသော အိုက်ပုသည် နောက်ထပ် ခြေတလှမ်းဘဲ လှမ်းသေးသည်။ ဝုန်းကနဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားသည်။ မာန်ဟုန် တံခါးဝမှာ ရှယ်လီနဲ့ နန်းကြာ ဆိုသော သူ့တပည့်မလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ့တပည့်မလေး လက်ထဲမှာ အသံထိန်းပြောင်းပါတဲ့ ပစ္စတိုတလက် ရှိနေသည်။ နန်းကြာက မာန်ဟုန်ကို ချိန်ထားတဲ့ အိုက်ပုကို အနောက်မှ ပစ်ပေးလိုက်တာ။
“ကျေးဇူးဘဲ … နန်းကြာ …” “ကိုမာန် … ဒီကောင်တွေ အလောင်းတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရအုံးမယ် … နန်းကြာ … ဗင်ကားပေါ် ဒီအလောင်းကောင်တွေ တင်မယ် …ကိုမာန် … ဗင်ကားကို နန်းကြာ မြို့ပြင် တနေရာကို မောင်းသွားပြီး … မီးရှို့ဖျက်ဆီး ပစ်ပေးလိမ့်မယ် …ကားက ခိုးကား …”
မာန်ဟုန် သူတွေ့နေရတာတွေကို အိပ်မက်လား ထင်မိရသည်။ ရှယ်လီသည် မယ်ဆိုင်မှာတုံးက အင်မတန်မှ ရိုးအေးသော ဆိုင်ရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်။ အခုတော့ ကားခိုးလာရတာနဲ့ အလောင်းဖျောက်ဖျက်ဖို့ စီစဉ်ရတာနဲ့ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ …” မာန်ဟုန့် မျက်နှာကို ရှယ်လီက သိလိုက်သည်။
“ကိုမာန် … ရှယ်လီလဲ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တော့ ဒီလိုဘဝတွေထဲ ကျင်လည်ခဲ့ရတယ် …” “ဘာ … ရှယ်လီက ဗိုလ်ခွန်မိုင်းနဲ့ … တောက် …” “ဟုတ်တယ်ကိုမာန်…ရှယ်လီ့အမျိုးတွေက ဘန်ကောက်က သူဌေး ဆိုပြီး လက်ထပ်ပေးလိုက်တာက ဗိုလ်ခွန်မိုင်းဘဲ … သူက ဘန်ကောက်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ လူဘဲလေ …” “ခွန်မိုင်းမယား ဖြစ်ရတာတော့ … ငါ အသဲနာတယ် …”
ရှယ်လီလဲ နန်းကြာနဲ့ အလောင်းများကို အိပ်ရာခင်းများနဲ့ ပတ်ပြီး … မာန်ဟုန့်အကူအညီနဲ့ ကားပေါ်ကို တင်သည်။ အားလုံး တင်ပြီးတော့ နန်းကြာက ဗင်ကားကို သွားဖျောက်ဖျက်ဖို့ ထွက်သွားချိန် မာန်ဟုန်နဲ့ ရှယ်လီတို့ ရှာထိုးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ စွန်းထင်းနေသည့် သွေးကွက်တချို့ကို ရေစို အဝတ်နဲ့ သုတ်သင်လိုက်ကြသည်။
“အင်း … လူတွေလဲ ညစ်ပတ်ပေရေကုန်ပြီ …ကိုမာန် … ဒီအိမ်ကနေ လစ်စို့ … ရှယ်လီ တခြားမြို့က ဟိုတယ်တခုမှာ ဒီည ခိုအောင်းဖို့ လုပ်ထားတယ် …” “နန်းကြာကကော …” “သူ့ကို ဘယ်ကို လိုက်လာရမလဲ ပြောပြီးပြီ …ကိုမာန် … သူ လိုက်လာလိမ့်မယ် …” “ဟုတ်ပြီလေ … ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ … ရှယ်လီရယ် …” “ကိုမာန့်ကို ရှယ်လီ ဘယ်လောက် ချစ်သလဲ ပြခွင့်ရတာကို ဝမ်းသာလှပြီ …”
အရင်က မြန်မာစကား တလုံးစ နှစ်လုံးစ သာ တတ်သော ဆိုင်းမီးစ်ကက်လေးသည် အခုတော့ မြန်မာစကားကို ပြောနေလိုက်တာမှ … ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ …။ မာန်ဟုန်နဲ့ ရှယ်လီ … တက်ဆီကားနဲ့ ရှယ်လီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသော ဟိုတယ်လေးကို သွားကြသည်။ ကားပေါ်မှာ ရှယ်လီသည် တချိန်လုံး မာန်ဟုန့် လက်ကို ဆုတ်ကိုင်ထားသည်။ ဟိုတယ် အခန်းကို ရောက်သောအခါ သူတို့ နှစ်ယောက် အတူတူ ရေချိုးဖို့ လုပ်သည်။ မာန်ဟုန်လဲ ကွဲကွာသွားရတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကို ဆွဲဖက်လိုက်သည်။
“အိုး …ကိုမာန် … ရေချိုးလိုက်ရအောင်ကွယ် … စောစောက ဟိုအကောင်တွေရဲ့ အလောင်းတွေကို သယ်ထားတာ သွေးတွေ ပေကျံထားတယ် …”
မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကိုယ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ ရှယ်လီက မာန်ဟုန့်လက်ကို ဆွဲကာ ရေချိုးခန်းထဲကို ခေါ်သွားသည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရှယ်လီသည် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို ဖယ်ခွာကာ ရေချိုးကန်ထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်သော အခါ မတွေ့ရတာ ကြာနေတဲ့ ရှယ်လီ့ အဝတ်မဲ့ကိုယ်တွေကို မာန်ဟုန် မြင်လိုက်ရသည်။
“လာလေ …ကိုမာန် … အတူတူ ချိုးရအောင် …”
ရှယ်လီက ခေါ်သည်။ မာန်ဟုန်လဲ သူ့ ကိုယ်မှာတခုထဲ ရှိနေတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်သည်။ ဆပ်ပြာမြုပ်များနဲ့ ရေချိုးကန်ထဲမှာ ရှယ်လီက မာန်ဟုန့်ကို ပွတ်သပ် ချေးတွန်းပေးသည်။ မာန်ဟုန်လဲ ရှယ်လီ့ အကိုင်အတွယ်များ ကြောင့် စိတ်တွေ ပြင်းထန် နိုးကြွလာရသည်။ ရေချိုးအပြီး … ရှယ်လီက သူ့တကိုယ်လုံးကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးတခုနဲ့ သုတ်ပေးချိန်မှာ မာန်ဟုန်ရဲ့ လိင်တန် ဟာ … အပေါ်ကို မတ်နေအောင် ထောင်နေပြီ။ အကြောကြီးတွေ ထောင်ထကာ မာကျောသန်မာလွန်းနေတဲ့ လိင်တန်ကို ရှယ်လီ့လက်ကလေးက အသာအယာ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး … “အရင်လိုဘဲနော် … သူ့ကို ရှယ်လီ လွမ်းတယ် သိလား …” ဆိုပြီး ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေး လေသည်။ ဖျတ်ကနဲ ရှယ်လီ ထိုင်ချလိုက်ပြီး မာန်ဟုန့် လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို ငုံလိုက်သည်။ ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲ … စုတ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ ရှယ်လီ့ လျာလေးက ဟိုပြေးဒီထိုးနဲ့ မာန်ဟုန့် လိင်တန် ထိပ်ဖူး တခုလုံးကို ပတ်ခြာလှည့်နေတော့တာဘဲ။ “အို … ရှယ်လီ ရယ် …” မာန်ဟုန် သူမ ခေါင်းလေးကို လက်တွေနဲ့ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ညည်းငြူနေရသည်။ ရှယ်လီ့ လျာလေးက ထိထိမိမိ အရသာထူးတွေ ပေးနေလို့။ ရှယ်လီသည် ကွဲကွာခဲ့ရတဲ့ သူမချစ်သူကို အတိုးချပြီး ချစ်သက်သေပြ နေသလားမသိ။ မာန်ဟုန့် လိင်တန်ကို ကျကျနန စုပ်ပေးလျက် ရှိသည်။
မာန်ဟုန်မှာ အရသာအတွေ့ထူးကဲလှတာကြောင့် ရှယ်လီ့ ပါးစပ်ထဲမှာပြီးသွားမှာစိုးပြီး ရှယ်လီ့ကို အစုပ် ရပ်ခိုင်းလေသည်။ ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန့်ကို ကုတင်ပေါ် လှဲအိပ်စေပြီး … မာန်ဟုန့် အပေါ်ကို တက်ခွထိုင်လိုက်သည်။ တယောက်နဲ့ တယောက် ဝေးကွာခဲ့ရပေမဲ့ အခုလို ပြန်တွေ့ကြတော့ ချစ်သူကို သူမ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုစုပေးလိုက်ချင်နေသည်။ လင်ရသွားပေမဲ့ ချောဆဲ လှဆဲ ဆိုင်းမိစ်ကက်ကို ကြည့်ပြီး မာန်ဟုန်ရဲ့ လိင်တန်သည် ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကာမစိတ် အရှိန်ကြောင့် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံနဲ့ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသည်။ ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန်ရဲ့ လိင်တန်ကို လက်လေးနဲ့ ဆွဲယူကာ သူမ အင်္ဂါစပ်မှာ တေ့လိုက်ပြီး အသာ ဖိထိုင်ချကြည့်သည်။
ဆိုင်းမီးစ်ကက်သည် မယ်ဆိုင်မှာ သူနဲ့ ချစ်ခဲ့တုံးက လိုဘဲ နုဖတ်ဖြူဖွေးပြီး တောင့်တင်းစိုပြေဆဲဘဲ …။ စိုရွှဲနေသော သူမ အင်္ဂါစပ်ထဲ မာန်ဟုန့် လိင်တန်သည် စီးစီးတင်းတင်း ဝင်ရောက်သွားသောအခါ ရှယ်လီသည် နှင်းဆီရောင်သွေး နှုတ်ခမ်းလေး ဖတ်ကနဲ ဟသွားပြီး မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကျသွားသည်။ သတိရ လွမ်းဆွတ် တမ်းတမိခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူရဲ့ အရင်က သူမ နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရသော လိင်တန်ကို သူမ ပြန်လည်ကြုံနေရပြီမို့။ ရှယ်လီ တင်ပါးကြီးတွေကို ကြွလိုက်သည်။ လိင်တန် ထိပ်ဖူး နားအထိ ကြွပြီးမှ ဖြေးဖြေး ပြန်ထိုင်ချသည်။ မာန်ဟုန်က ရှယ်လီ့ တင်ပါးတွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ထားသည်။ ဒီနေ့ည ချစ်တင်းနှီးနှောရတာကိုတော့ အမြဲသတိရနေမှာဘဲ။
ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန့်အပေါ်မှာ နေပြီးတော်တော်ကြာကြာ လုပ်ပေးနေပြီးသောအခါ မာန်ဟုန့်ကို အလှည့်ပေးသည်။ မာန်ဟုန်လဲ ပထမဆုံး … ရှယ်လီ့ကို လှေကြီးထိုး ရိုးရိုး ပုံနဲ့ဘဲ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆက်ဆံပြီး မှ ပုံစံ အမျိုးမျိုးပြောင်းကာ လုပ်လေသည်။ ရှယ်လီလဲ သူမ ပြန်မတွေ့တော့ဘူးလို့ ထင်ထားသော မာန်ဟုန်နဲ့ အခုလို စိတ်တိုင်းကျ ချစ်ပွဲဝင်ရလို့ ကြည်နုးအားရလို့ မဆုံးတော့။ သူတို့ နှစ်ကြိမ် ချစ်ပွဲဝင် ကာမ စပ်ရှက်ပြီးချိန်မှာ ရှယ်လီ့တပည့်မလေး နန်းကြာ ပြန်ရောက်လာသည်။ နန်းကြာက မြို့ပြင် တနေရာမှာ … အလောင်းတွေ ပါတဲ့ဗင်ကားကို မီးရှို့ပြီးကြောင်း ပြောပြသည်။
“ကဲ … နန်းကြာ ရေချိုးလိုက်အုံး …”
ရှယ်လီက ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ကို ကယ်ဖို့ ရန်သူစခန်းကို ဘယ်လိုဝင်မယ်ဆိုတာ မာန်ဟုန့်ကို ပြောပြသည်။ ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ ရှမ်းလေးရဲ့ စိတ်သဘာဝနဲ့ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်တွေကို ပြောပြသည်။ ရှယ်လီက သူတတ်နိုင်သမျှ ကူညီမည်လို့ ပြောသည်။ ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန်နဲ့ ချစ်ခဲ့တုံးကလို ကြက်ဆီထမင်း ရောင်းတဲ့ ကောင်မလေး မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘိန်းဓါးပြတယောက် ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့ မယားဘဝ ရောက်ခဲ့တာကြောင့် တောတောင်ထဲမှာ လုပ်စားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အတူတူနေ အတူတူစားခဲ့တာမို့ တပည့်တပန်းတွေလဲ ရှိလာ … . သေနတ်လက်နက်တွေနဲ့လဲ ရင်းနှီးအကျွမ်းဝင်နေပြီ။
ရှမ်းလေးသည် ကျားဖြူမ သူနဲ့ ရှိနေလို့ ကျားဖြူမနဲ့ဘဲ နေ့ရောညပါ အလုပ်များနေသည်။ လိင်ဆက်ဆံကြတာ တခုထဲ မဟုတ်။ ကျားဖြူမက ယုန်ပစ်၊ တောကြက်ပစ်ပြီး ကင်စားချင်သည် ဆိုရင်လဲ ရှမ်းလေး … . ကျားဖြူမ ဖြစ်စေချင်တာ အားလုံးကို လုပ်ပေးသည်။ ကျားဖြူမသည် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီနယ်တဝိုက်မှာ လူသိများလာသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တယောက် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တပည့်တွေရှေ့ မိုက်ပြတတ်သည်။ အကြောင်းမဲ့ သေနတ် ပစ်ဖေါက်တာတို့ ကျေးရွာလူထုတွေကို နှိပ်စက်တာတို့ လုပ်လေ့ရှိသည်။ ကျားဖြူမနဲ့ သူ ညိကြပြီ ဆိုတော့ ကျားဖြူမသည် သူ့အရှိ်န်နဲ့လဲ ပိုထောင်လာသည်။ ကျားဖြူမ သူ့ဆီလာတာ သူ ဖြုတ်တာကို ခံချင်လို့ တခုထဲ ဟုတ်ဟန်မတူ။ ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်တို့ကို သူ ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာ သိလို့ လာကြည့်တာလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်ဒီ့ကို မုဒိန်းကျင့်ချင်လို့ ထကြွနေတဲ့ သူ့စိတ်တွေ ကျားဖြူမကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြုတ်လိုက်ရလို့ နဲနဲ ပြေသွားသလိုဘဲ။ ရှမ်းလေးသည် သူ့ကိုယ်သူ တဏှာစိတ်ကြီးသူ ဆိုတာလဲ သိသည်။ သူသည် မိန်းမ ၀ါသနာကြီးသူ ဖြစ်သည်။ ညက ကျားဖြူမကို သူ ပီပီပြင်ပြင် အချီပေါင်းများစွာ ဖြုတ်ခဲ့သည်။ မနက်ကျားဖြူမ နှိုးလို့ သူနိုးလာသည်။ ကျားဖြူမသည် အဝတ်အစားတောင် လဲပြီးနေပြီ။
“ချစ်လေး … ဘယ်သွားမလို့လဲ … ” “ဟိုဘက် ချောင်းထိပ်က ရွာကို သွားမလို့ … ” “ဘာသွား လုပ်မှာလဲ … လိုက်ခဲ့ရမလား … ” “မလိုက်ပါနဲ့ … အကြွေးသွားတောင်းရုံ သက်သက် ပါ … ”
ကျားဖြူမသည် ၉မမ ပစ္စတို ပါသော စစ်သုံး ခါးပတ်ပြားကြီးကို ခါးမှာ ပတ်လိုက်သည်။ နံရံမှာ ကပ်ထောင်ထားသော သူမရဲ့ ၉မမ အမ်ပီဖိုက် သေနတ်ကို ကျည်အိမ်ထဲ ကျည်စစ် … မောင်းတင် … လုံခြုံရေး ခလုပ်ချပြီး လွယ်လိုက်သည်။
“ဘယ်သူတွေ ခေါ်သွားမလဲ … ” “ကောင်လေး ငါးယောက်လောက် ပါမယ် … ကဲ … သွားပြီ … ညနေလောက်မှ ပြန်ခဲ့မယ် … ”
ရှမ်းလေး အိပ်ရာက ထသည်။ တံခါးဝ ကနေ ကျားဖြူမတို့ စခန်းထဲက ထွက်သွားတာ ရပ်ကြည့်နေသည်။
“ဒေဝီ … ” “ရှင် … ဘာလိုချင်လဲ … ဗိုလ်ကြီး … ”
အသက်၃ဝခန့် အနက်ရောင်ထမိန်၊ အနက်ရောင်အင်္ကျီ ဝတ်ထားသော အသားဖြူဖြူ လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမတယောက် ပြေးဝင်လာသည်။
“ငါ ဆာတယ်ဟာ … ဘာရှိလဲ … ယူခဲ့ … ” “ကောက်ညှင်း ရှိတယ် ဗိုလ်ကြီး … ယုန်သားကင်တို့ ဂျီသားကင်တို့လဲ ရှိတယ် … ကျမသွားယူလိုက်အုံးမယ် … ”
ရှမ်းလေး မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ပြီးချိန်မှာ ဒေဝီသည် စားသောက်စရာတွေနဲ့ အဆင်သင့် စောင့်နေပြီ။
“ဒေဝီ … ” “ရှင် … ဗိုလ်ကြီး . .” “ဒါ ဘာတွေလဲ … ” “အော် … ဒါ … ဆိတ်ကတုံးသား” “ဘာ … ထွီ … ဘာလို့ ငါ့လာကျွေးတာလဲ … ဘယ်က ရလာတာလဲ … ” “ဆရာမ ကျားဖြူမတို့ ယူလာတာ … ”
ကျားဖြူမ နံမည် ပါသွားလို့ ဒေဝီ သက်သာသွားသည်။ မဟုတ်ရင် ရှမ်းလေးဆိုတဲ့ ကောင်က စိတ်မထင်ရင် ပါးရိုက်တတ်သည်။
“ဒေဝီ … နောင်ကို ခွေးသား ငါ့ဘယ်တော့မှ လာမကျွေးနဲ့ … ကြားလား … ရော့ … အပြင်ယူသွားစမ်း … ” “ဟုတ်ကဲ့ … ဗိုလ်ကြီး . .”
ရှမ်းလေး ကောက်ညှင်းနဲ့ ယုန်သားကင်များ ပလုပ်ပလောင်း စားနေတုံး ဒေဝီ ပြန်ဝင်လာသည်။ ဒေဝီရဲ့ ရင်ဘတ်နေရာက လှုပ်တုတ်တုတ်နဲ့မို့ ရှမ်းလေး သေသေချာချာ ကြည့်နေသည်။
“ဒေဝီ… ” “ရှင် … ဗိုလ်ကြီး … ” “လာစမ်း … ဒီနား … နင် အောက်မှာ ဘာမှ ခံဝတ်မထားဘူးလား … ” “ဟီး … ဟုတ်ကဲ့ … ဘရာစီယာ လျှော်ထားလို့ … ” “ဟ … နင့်ဟာက တထည်ထဲ ရှိလို့လား… … ပြစမ်း … နင့် နို့ကြီးတွေကလဲ အယ်နေတာဘဲ … ”
ရှမ်းလေးသည် ဒေဝီရဲ့ အင်္ကျီပေါ်ကနေ သူမ ရင်သားတွေကို စမ်းနေသည်။
“ဒေဝီ … ” “ရှင် … ဗိုလ်ကြီး… … ” “နင်… စိုင်းမောင် သေပြီးနောက် ဘယ်ကောင်နဲ့ ဖြစ်သေးလဲ … ” “မဖြစ်ပါဘူး … ” “နင် … သေချာလား … ” “အဟုတ်ပါ … ဗိုလ်ကြီး…” “နင်… လင်မရှိတော့ … မဆာဘူးလား … မလိုချင်ဘူးလား … ” “အာ … ဗိုလ်ကြီးကလဲ … ဘာတွေ လာမေးနေလဲ မသိဘူး … ”
ဒေဝီက ရှက်သလိုနဲ့ ခေါင်းငုံ့ထားသည်။ ရှမ်းလေးက ရင်သားစိုင်တွေကို သေသေချာချာကိုင်နေသည်။
“ဒေဝီ … နင် ပုလွေကိုင်ဘူးတယ် မဟုတ်လား … ” “ဟုတ် … ” “နင့်နို့တွေ ကိုင်ကြည့်တာ ငါ … တောင်လာပြီ … ငါ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးစမ်းဟာ … လာ… ”
ရှမ်းလေး … သူ့ဘောင်းဘီကို လျော့ချသည်။ ဒစ်ပြဲပြဲနဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးက မတ်မတ်တောင်နေသည်။
ဒေဝီလဲ လိင်တန်ကို အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ ငုံကာ စုတ်ပေးလိုက်သည်။ “အိုး … ကောင်းတယ် … ဟူး … နင် … နင် … တယ်စုပ်တတ် ပါလား …”
ဒေဝီသည် သူ့လိင်တန် ထိပ်ဖူးကို လျာနဲ့ ရစ်ပတ်လှိမ့်နေသည်။ အင်း … ဒါကြောင့် … ရှမ်းလေး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မိန်းမတွေကို သဘောကျတာ။ ဒေဝီ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ့လိင်တန်ကို ထိုးထိုးသွင်းနေသည်။
ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်သည် သူတို့ကို ထည့်ထားသော အခန်းထဲတော်တော် အခက်အခဲတွေ့သည်။ သူတို့ ရောက်ခါစမှာ ဆီးချုပ် ဝမ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး နေလို့မကောင်း ဖြစ်ကြရသည်။ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်သော အစောင့်ကောင် ရှိနေတာနဲ့ ဆီးသွား … ဝမ်းသွားဖို့ မလုပ်ချင်ကြတာနဲ့။ ရောက်ပြီး သုံးရက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို တခန်းထဲ အတူတူ မထားတော့။ တယောက် တခန်း ထားသည်။ ရေမချိုးဘဲ ကြာလာတော့လဲ ညစ်ပတ်နံစော်လာသည်။ ရေချိုးဖို့ကလဲ ခက်သည်။ ပြီတီတီနဲ့ ဘေးကနေ လာကြည့်နေသော ရှမ်းလေးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ကြောင့် … ။ မာန်ဟုန် တယောက်တော့ ခုလောက် ဆိုရင် သူတို့ကို လာကယ်ဖို့ ဒီနိုင်ငံနယ်စပ်ကို ရောက်နေမည်လို့ ခန့်မှန်းနေကြသည်။ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့ အစောင့် မရှိတာနဲ့ ဝင်ဒီ ရေပတ်တိုက်ဖို့ ပြင်သည်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အသေးစားတခုကို ရေဆွတ်ပြီး ကိုယ်အနှံ့ လိုက်သုတ်တာ။ သူမ ဆေးကြောသန့်စင်နေခိုက် ခြေသံကြားရလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … ရှမ်းလေးသည် တဏှာခိုး ဝေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ သူမကို စိုက်ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။
“တောက် … လှတယ် … လှတာ အရမ်း … ဟူး … စိတ်တွေ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး …”
ရှမ်းလေး … .. ဝင်ဒီ့ကို ထည့်ထားတဲ့ အခန်းလေးထဲ ဝင်လိုက်သည်။ ဝင်ဒီ သူမကိုယ်သူမ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ဖုံးကာလိုက်သည်။ ရှမ်းလေး … ဝင်ဒီ့ကို အတင်း ဝင်ဖက်ကာ နမ်းသည်။ ကိုင်သည်။
“ဟေ့ကောင် … မလုပ်နဲ့ … လွှတ် …”
ရှမ်းလေးသည် ဝင်ဒီ့ကို ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။
“ဝင်ဒီ …. ခင်ဗျားကို သဘောကျနေတာ ကြာပြီ … ကဲပါ … ရုန်းမနေနဲ့ … ခင်ဗျား … ကျုပ်ကို … ကြိုက်သွားမှာပါ … ဒီမှာကြည့် … ဘန်ကောက်မှာ ခွဲစိတ်ထားတာ …”
သူ့ ဂေါ်လီများ ထည့်ထားသော လိင်တန်ရှည်ကြီးကို ပြသည်။
“ကောင်စုတ် … ထွက်သွား … နင့်ကို ဘယ်တော့မှ ငါကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး …” “ဟားဟား … မသိရင် ခက်မယ် … ခင်ဗျားကို လော်ပန်ကြီး ဖမ်းခေါ်သွားတုံးက လော်ပန်ကြီး လုပ်တာကို ခင်ဗျား ကြိုက်သွားဘူးတယ်လေ … အားလုံး … သိထားပြီးသား … ကဲ လာ … လုပ်ကြရအောင် …”
ရှမ်းလေး အကြမ်းဖက်ပြီ။ အတင်း တက်ခွ ကာ ကျင့်ဖို့ ကြိုးစား လေပြီ။ ဝင်ဒီက ခြေထောက်နဲ့ကန် … လက်သဲနဲ့ကုတ် … အော်ဟစ် လုံးထွေးကြပြီ။
အခန်းပေါက်က ခေါ်သံကြောင့် ရှမ်းလေး လှည့်ကြည့်သည်။ သူ့တပည့် … ကွန်းလုံ။ “ဟေ့ကောင် ဘာလဲ … ဘာလဲ …”
ရှမ်းလေး … ဖင်အပြောင်သား ဂွေးတန်းလန်းနဲ့မို့ … ကွန်းလုံကို အရမ်း စိတ်ဆိုးသည်။
“ဗိုလ်ကြီး … ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့မိန်းမ မရှယ်လီနဲ့ အဖွဲ့ ရောက်နေတယ် …” “ဟေ … ဘယ်မှာလဲ …”
ရှမ်းလေး ကဗျာကရာ ထသည်။ ဘောင်းဘီ ပြန်စွတ်သည်။
“ကျနော်တို့ ကင်းအဖွဲ့ကို သူတို့ ကျော်လာပြီ … ရောက်တော့မယ်…” “ဟေ … သူတို့ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ … တောက် … ဘာလာလုပ်သလဲ မသိဘူး …” “သူတို့ အားလုံး ရှစ်ယောက် … ဗိုလ်ကြီး … လားလေးကောင်နဲ့ …”
ရှမ်းလေး … ဝင်ဒီ့ အချုပ်ခန်းကို ပြန်ပိတ် … သော့ခတ်ပြီး စခန်းရှေ့ကို ထွက်သည်။ မကြာခင် မရှယ်လီနဲ့အဖွဲ့ သူ့ရှေ့ ရောက်လာသည်။ မရှယ်လီနဲ့ ငယ်သား ခုနစ်ယောက်။ မိန်းမတယောက် … ယောင်္ကျားခြောက်ယောက်။
“ဟား … မရှယ်လီ … ကိုယ်တိုင် လာပုံထောက်တော့ ဘာများ အရေးကြီးသလဲဗျ … ..” “ကျားဖြူမရော … ရှမ်းလေး …” “အခု မနက်ဘဲ … ဟိုဘက်ချောင်းထိပ်က ရွာကို သွားတယ် … ကြွေးသွားတောင်းတယ် ပြောတာဘဲ …” “အေး … ကျားဖြူမကို အရေးတကြီး ပြောစရာရှိလို့ လိုက်လာတာ …” “သူ ညနေစောင်းရင် ပြန်ရောက်မယ် … မရှယ်လီ …” ရှမ်းလေးသည် ဗိုလ်ခွန်မိုင်းက ကျားဖြူမရဲ့ အဖေမို့ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပြီး မရှယ်လီကလဲ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့ ဇနီးမယားမို့ လေးစားလေသည်။
“ဒီအထိ မစောင့်နိုင်ဘူး … ရှမ်းလေး … တတ်နိုင်ရင် အမ ကျားဖြူမနောက် လိုက်သွားချင်တယ် …” “အင်း … မရှယ်လီ သဘောဘဲ … လိုက်သွားချင်ရင် ကျနော် လိုက်ပို့ပေးမယ် …” မရှယ်လီက သူ့လူတွေကို လားတွေပေါ်က တချို့အထုပ်တွေကို ချခိုင်းသည်။
“ရှမ်းလေး … အမတို့ ဆတ်သားတွေ ပါလာတယ် … ဒို့ ကျားဖြူမဆီ လိုက်သွားတုံးကို အမ တပည့်တချို့ကို မင်းတို့မီးဖိုမှာ ချက်ခိုင်းခဲ့လို့ ဖြစ်မလား … ညနေ ပြန်လာရင် … ဆတ်သားဟင်းနဲ့ ကောင်းကောင်း ညစာစားရအောင် ကျားဖြူမလေးက ဆတ်သားဟင်း … သိပ်ကြိုက်တာ …” “အမသဘောဘဲ … ချက်လို့ ဖြစ်ပါတယ် …”
ရှမ်းလေး … ကျည်ကပ်များ ပါသော စစ်ခါးပတ် ပတ်လိုက်ပြီး … သူကိုင်နေကျ အေကေ၄၇ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကို ဆွဲယူလိုက်သည်။ “ကွန်းလုံ … မရှယ်လီဆီက ထမင်းချက်မဲ့ လူတွေကို ပြပေးလိုက် … ကျန်တဲ့ … စစ်ကျန်တို့ လူစု … ရှေ့ပြေးကင်း စထွက် … ဒို့ချောင်းထိပ်ရွာကို ထွက်မယ် …” “ဟုတ် … ဗိုလ်ကြီး …”
မရှယ်လီလဲ ရှမ်းလေးနဲ့ စကားတပြောပြောနဲ့ လိုက်သွားသည်။ သူမတပည့် နန်းကြာနဲ့အဖွဲ့က ထမင်းချက်ဖို့ ကျန်ခဲ့သည်။ သုံးယောက်ဘဲ သူတို့ ဆရာမနဲ့ လိုက်ပါသွားသည်။ ရှမ်းလေးရဲ့ တပည့်ဆယ်ယောက်ခန့် သူတို့နဲ့ လိုက်ပါသွားသည်။ တဏှာအားကြီးသော ရှမ်းလေးသည် မရှယ်လီဟာ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းရဲ့ မယားသာ မဟုတ်ခဲ့ရင် အလွတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ မရှယ်လီလို ဖြူဖွေးကျော့ရှင်းတဲ့ မိန်းမကို သူ ဘာဂျာမှုတ်ချင်ကြောင်း … အရက်မူးတဲ့အခါတိုင်း … တပည့်တွေကို ပြောလေ့ရှိသည်။
ကွန်းလုံသည် ပြောက်ကြားဝတ်စုံ ယူနီဖေါင်း ဝတ်ထားတာတောင် … တောင့်တင်းလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက သိသိသာသာကြီး ကော့ထွက်နေတဲ့ နန်းကြာရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို ငေးမောရင်း … မီးဖို လုပ်ထားသော တဲလေးကို လိုက်ပြလေသည်။ နန်းကြာက စိုင်းဘိုဘို ဆိုတဲ့ မုတ်ဆိတ်ပါးသိုင်းမွေး ထူလပျစ်နဲ့ လူကို ဆတ်သားများ ယူခဲ့ဖို့ ခိုင်းလိုက်သည်။ စိုင်းဘိုဘိုဆိုတဲ့ လူကို ကွန်းလုံ တခါမှ မမြင်ဘူး။ လူသစ် ထင်သည် … ။ စိုင်းဘိုဘိုက လားပေါ်က ကျောပိုးအိတ်တွေနဲ့ ထည့်လာသော ဆတ်သားတွေကို သယ်ချလာသည်။
“လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပါလား … ဘယ်တုံးက ပစ်တာလဲ …” “ဒီနေ့ မနက်စောစောဘဲ … ဆရာမရှယ်လီ ပစ်တာ … သာတီး အို စစ် … နဲ့ …”
နန်းကြာက စင်းနီတုံးကြီး အပေါ်မှာ ဆတ်သားတွေ ခုတ်ထစ်ရန် ပြင်ခိုက် … စိုင်းဘိုဘိုက … သစ်ပင်စုစု ရှိနေတဲ့ဘက် လျောက်သွားလို့ … ကွန်းလုံက … “ဟေး … ဘယ်လဲ … ဘယ်သွားမလို့လဲ …”လို့ လှမ်းမေးသည်။ စိုင်းဘိုဘိုက … ဘိုက်ကို နှိပ်ပြသည်။ ခြုံတိုးဖို့လို့ သဘောပေါက်သွားသော ကွန်းလုံက “ဟေး … အိမ်သာအထဲမှာ ရှိတယ် … ခြုံထိုင်တာ ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ကြီးက မကြိုက်ဘူး … အထဲသွား …” လို့ လှမ်းအော်ပြောသည်။ စိုင်းဘိုဘိုလဲ ဆောရီးဘဲဆိုပြီး အနောက်ဘက် အပေါက်ကနေ အဆောက်အဦးထဲကို ဝင်သည်။
ခမ်းသီသည် အချုပ်ခန်းထဲက မဟန်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ မဟန်သည် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေသည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက ကျားကြီးလိုဘဲ။ မဟန်ရဲ့ ခါးသေးသေးအောက်က စွင့်ကား လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးလှလှကြီးတွေက တုန်ခါသွားနေတာကို ခမ်းသီ သေသေချာချာ ကြည့်နေတာ။ မဟန်ရဲ့ မျက်နှာက စူပုတ်နေသည်။ ခမ်းသီ တဖက်ခန်းဘက် လျှောက်သွားလိုက်ပြီး ဝင်ဒီကို ချောင်းပြန်သည်။ အချုပ်ခန်းစောင့် တာဝန်ကျတာ ခမ်းသီအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်နေရသည်။ မိန်းမချောနှစ်ယောက်ကို ဖမ်းထားတာမို့။ တညမှာ ဝင်ဒီ သေးပေါက်နေတာကို သူ မြင်လိုက်ရသည်။ တခါလဲ မဟန် ရေပတ်တိုက်နေတုံး … မဟန်ရဲ့ ရင်သားထွားထွားတွေကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဝင်ဒီသည် ကုတင်ပေါ်မှာ ခွေလှဲနေသည်။ သူမရဲ့ အချိုးကျတဲ့ ပေါင်တန်သွယ်တွေနဲ့ တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကို ခမ်းသီ တပ်မက်ဖွယ် မြင်လိုက်ရလို့ ငေးနေမိသည်။ ခြေသံကြားလိုက်လို့ ခမ်းသီ သူ့ခါးမှာ အိတ်နဲ့ ထည့်ချိတ်ထားသော သေနတ်ဆီကို လက်ရောက်သွားသည်။ လူတယောက်။ မုတ်ဆိတ်ပါးသိုင်းမွေးထူလပျစ်နဲ့။ ပြောက်ကြား ပုံဖျက် ယူနီဖေါင်းနဲ့။
“ဟိတ် … ဒါ ဘယ်လဲ …” ခမ်းသီ မေးသည်။ “ဟို … ဟို … အ်ိမ်သာ … ..” “ဒီဟာ ကန့်သတ် နယ်မြေ … လာခွင့်မရှိဘူး … မင်း ဘယ်ကလဲ …” “ဟီး … ကျုပ် ဆရာမ ရှယ်လီအဖွဲ့ … အဲ ဗိုလ်ခွန်မိုင်းအဖွဲ့က …” “ပြန်လှည့် … ဒီနားကို လာခွင့်မရှိဘူး …”
ခမ်းသီ ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် လုပ်ချင်လို့ ဘယ်ဘက်ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ လမ်းလျှောက် စကားပြောစက်ကို ထုတ်လိုက်သည်။ မုတ်ဆိတ်ပါးသိုင်းမွေးနဲ့လူ ဖျတ်ကနဲ ခမ်းသီဆီကို ပူးကပ်လာပြီး ခမ်းသီရဲ့လည်ပင်းကို ဓါးတချောင်းနဲ့ ထိုးစိုက်လိုက်သည်။အငိုက်မိသွားပြီ။ ခမ်းသီ အသံတောင် မထွက်နိုင်ဘဲ … လဲကျသွားရသည်။ အခန်းထဲက ဝင်ဒီ ဖြစ်ပျက်တာတွေကို အစအဆုံး မြင်လိုက်သည်။
“ဟင် … မင်း … မင်း … ဘယ်သူလဲ … အို … မာန် … မာန်ဟုန် …” “ဟုတ်တယ် … မ … ကဲ … လစ်ကြမယ် …”
မုတ်ဆိတ်ပါးသိုင်းမွေးဗလပျစ်နဲ့ လူက ခမ်းသီခါးက သော့တွဲ ဖြုတ်ပြီး အချုပ်ခန်း တံခါးတွေကို ဖွင့်သည်။ မဟန် ပြေးထွက်လာပြီး ခမ်းသီခါးက သေနတ်ကို ထုတ်ယူသည်။ မျက်လုံးကြီး ပြူးထွက်ခါ အသက်ပျောက်နေသော ခမ်းသီကို တံတွေးနဲ့ ထွေးကာ …“နှာဘူးကောင် … သေးပေါက်တာ အမြဲချောင်းတယ် …” လို့ ရေရွတ်လိုက်သည်။ ဝင်ဒီသည် ဖျတ်လတ်စွာ အချုပ်ခန်းထဲက ပြေးထွက်လာပြီး မာန်ဟုန် လှမ်းပေးသော သေနတ်ကို ယူသည်။
နန်းကြာသည် ဆတ်သားတုံးတွေကို မဆလာနဲ့ ဆားနဲ့ နယ်ပြီးတာကြောင့် သူမ ကြက်သွန်လှီးခိုင်းထားသော ကွန်းလုံကို …“ဆီ ရှိတယ် မဟုတ်လား …”လို့ လှမ်းမေးသည်။ ကွန်းလုံလဲ သူ့သေနတ်ကို နံရံမှာ ထောင်ထားပြီး ကြက်သွန်အနီ အခွံခွာ ပါးပါးလှီးပေးနေသည်။
“ရှိတယ် … ဘယ်ဘက်က စားပွဲအောက်မှ ဆီပုံး …” “ဟုတ် … တွေ့ပြီ …” “အချိုမှုန့်ရော ရှိလား …” “အာ … အင်း … ဒီမှာတော့ မရှိဘူး … ကျုပ် သွားယူပေးနိုင်တယ် … ဟိုဘက် တဲကြီးမှာ ရှိမယ် …” ကွန်းလုံ … ကြက်သွန်လှီးတဲ့ ဓါးကို စင်းနီတုံးပေါ်ချကာ တဲလေးထဲက ထွက်ဖို့ပြင်ခိုက် … “ထုတ်ဖေါက် …” ဆိုပြီး နန်းကြာက အသံထိန်းပြောင်းတပ်ထားတဲ့ သေနတ်နဲ့ နောက်စိကို တေ့ဖြုတ်လို့ အသံတောင် မထွက်နိုင်ဘဲ ခွေကျသွားရသည်။ နန်းကြာ ကွန်းလုံရဲ့ အေကေ၄၇ သေနတ်ကို ကောက်ပြီး ကျောမှာ လွယ်လိုက်သည်။ “အိုး … သူတို့ ထွက်လာကြပြီ …”
မာန်ဟုန် … ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်တို့ စခန်းကြီးထဲက ထွက်လာနေပြီ။ မာန်ဟုန်က နန်းကြာဟာ သူတို့လူဆိုတာ မဟန်နဲ့ ဝင်ဒီတို့ကို ပြောပြနေသည်။ နန်းကြာက ဦးဆောင်ပြီး … လားများ ထားသော တင်းကုတ်ဘက်ကို သွားသည်။ လားတင်းကုတ်မှာ နန်းကြာတို့အဖွဲ့က ရှယ်လီ့တပည့်များနဲ့ ပူးပေါင်းမိသွားသည်။ လားတွေပေါ်တင်လာသော အာရ်ပီဂျီ ရော့ကက်လောင်ခြာနဲ့ အမ်ရ၉ လောင်ခြာတွေကို သူတို့ ထုတ်ကိုင်လိုက်ကြသည်။ နန်းကြာက
“ဒို့ ဒီစခန်းထဲက ထွက်မယ် … ဆရာမ ရှယ်လီနဲ့က သုံးယောက် ပါသွားတယ် … ဆရာမရှယ်လီနဲ့ သေမင်းတောင်ကုန်းမှာ ဆုံဖို့ ချိန်းထားတယ် … စိုင်းစံထွန်း … ကင်းတွေကို စနိုက်ပါနဲ့ ရှင်း …” လို့ သူ့လူတွေကို ပြောရင်း … သူတို့ လားတင်းကုတ်တွေ အနောက်ဘက် ခြံစည်းရိုးကို ဖေါက်ထွက်ကြသည်။ စိုင်းစံထွန်းရဲ့ အသံတိတ်ပြောင်းတပ် မှန်ပြောင်းတပ် ရိုင်ဖယ်က စခန်းအပြင်က ကင်းသမားတွေကို တယောက်ပြီး တယောက် ရှင်းပစ်လိုက်သည် … ။ သူတို့လူစု ရှမ်းလေးရဲ့ စခန်းနဲ့ ဝေးရာကို သုတ်ခြေတင်ကြချိန် … အတွဲလောက် ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ မောင်းပြန်သေနတ်သံများ ဆူညံသွားသလို … ကျည်ဖူးများက ဝစ်ကနဲ … ဝစ်ကနဲ … သူတို့အနားက ဖြတ်သွားသည်။
“နေရာယူ … ….”
မာန်ဟုန်လဲ သစ်ပင်ကြီးတပင်မှာ အကာအကွယ်ယူလိုက်ပြီး ကျည်ဆံများ လာရာဘက်ကို သူ့လက်ထဲက အမ်၁၆သေနတ်နဲ့ တဒုန်းဒုန်း ပစ်ခတ်လိုက်သည်။ စခန်းက ရန်သူများ သူတို့ ထွက်ပြေးတာ သိသွားပြီး လိုက်လာတာဘဲ။ မဟန် … ဝင်ဒီ … နန်းကြာတို့ဆီက မောင်းပြန်တွေ တဝေါဝေါ ပစ်ခတ်တာကြောင့် ရန်သူဘက်က နဲနဲ အသံတိတ်သွားသည်။
“မ … မဟန် … လျှိုထဲ ဆင်း … မာန် ခံပစ်ထားမယ် … ..”
မာန်ဟုန်နဲ့ နန်းကြာတို့ ရန်သူဘက်ကို အော်တိုနဲ့ ဒလစပ် ပစ်ခတ်ပေးနေတုံး … ဝင်ဒီ မဟန်နဲ့ နန်းကြာတို့အဖွဲ့က လူတွေ လျှိုထဲ ဆင်းကြသည်။ နန်းကြာက အာရ်ပီဂျီတလုံး ပစ်လွှတ်လိုက်သည်။ ပေါက်ကွဲသံနဲ့ အတူ ဖုံလုံးကြီး ဝုန်းကနဲ ထကြွပြီး … သစ်ကိုင်းများ ကျိုးပဲ့ ပြတ်လွင့်ကုန်သည်။ ရန်သူများဘက်က ပစ်ခတ်သံ ရပ်သွားသည်။
“ပြေး … ပြေး … ဆုံရပ်ကို ပြေး … သေမင်းတောင်ကုန်းက ဒီဘက်တဲ့တဲ့မှာ …”
နန်းကြာက ရန်သူရှိရာဘက်ကို ချိန်ရွယ်ကာ နောက်ပြန် ပြေးနေရင်း … လက်ညှိုးညွှန်ပြသည်။
ရှယ်လီသည် ကျားဖြူမနဲ့ ချောင်းထိပ်ရွာမှာ ဆုံသောအခါ လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်းတခုကို ပြောဆိုလေသည်။ ကျားဖြူမလဲ ရှယ်လီ ပြောတာကို ယုံကြည်ပြီး … ရှမ်းလေးစခန်းကို ပြန်မလိုက်တော့ဘဲ … ရှယ်လီနဲ့ သူ့အဖေ ဗိုလ်ခွန်မိုင်း စောင့်နေတယ် ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်ရွာလေးကို လိုက်မည်လို့ ပြောကာ ရှမ်းလေးကို နှုတ်ဆက်ပြီး လမ်းခွဲကြသည်။ ရှမ်းလေးလဲ သူ့လူတွေနဲ့ ချောင်းကို ဖြတ်ပြီး သူ့စခန်းဘက်ကို ပြန်သည်။ ရှယ်လီနဲ့ သူ့လူသုံးယောက် … ကျားဖြူမနဲ့ သူမ တပည့် နှစ်ယောက် … ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်ကို ထွက် သည်။ ကျားဖြူမက …“ဆတ်သားဟင်းနဲ့ ဒီညနေ လွဲသွားတာပေါ့ …” လို့ ရှယ်လီ့ကို ပြောသည်။ ချောင်းထိပ်ရွာမှာ နေ့လည်စာ စားတော့ ကျားဖြူမ … ဝစ်စကီတွေ တအားနင်း သောက်ထားလို့ မူးနေသည်။ သူတို့ခေါင်းပေါ်က သစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေက မျောက်အုပ်တွေ တပင်ကနေ တပင်ကို ကူးလူးနေကြတဲ့ အသံတွေက ဆူညံနေသည်။ သားကောင်ပစ် ၀ါသနာပါသော ကျားဖြူမ မော့ကြည့်ပြီး … သူမ လွယ်ထားတဲ့ အမ်ပီဖိုက်သေနတ်နဲ့ မျောက်တွေကို ပစ်ခတ်သည်။ တဖြောင်းဖြောင်း ၉မမ အမ်ပီဖိုက် သေနတ်သံတွေ ဆူညံသွားသည်။ လမ်းလျှောက် စကားပြောစက်ကနေ ရှမ်းလေး အသံပေါ်လာသည်။
“ဟေး … ဘာဖြစ်လဲ …”
ကျားဖြူမက စက်နဲ့ …“မျောက်ပစ်တာ … ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ …” လို့ ပြန်ပြောသည်။ မျောက်တွေ သစ်ပင်ဖျားကနေ ဘုတ်ကနဲ … ဘုတ်ကနဲ … ပြုတ်ကျလာသည်။
ရှယ်လီလဲ ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့တပည့် သုံးယောက်ကို မျက်ရိပ်ပြလိုက်သည်။ ရှယ်လီ့ တပည့်များလဲ ကျားဖြူမ တပည့်နှစ်ယောက်ကို ပစ္စတိုများနဲ့ ရုတ်တရက် ပစ်ခတ်လေသည်။ ကျားဖြူမ ကြောင်နေသည်။ သူမ တပည့်နှစ်ယောက် သေပြီ။ ရှယ်လီက ကျားဖြူမရဲ့ အမ်ပီဖိုက်နဲ့ ခါးက ပစ္စတိုကို သိမ်းယူလိုက်သည်။ တပည့်တယောက်က ကျားဖြူမကို လက်ပြန်ကြိုး တုတ်လိုက်သည်။ ရှမ်းလေးလဲ ကျားဖြူမ မျောက်ပစ်တာဘဲဆိုပြီး စိတ်ပူပုံမရ။ စက်နဲ့ “ဘယ်နှစ်ကောင်ရလဲ” မေးသည် … ။ ရှယ်လီက နှစ်ကောင် ကျတယ် …” လို့ ပြန်ဖြေသည်။ ရှမ်းလေးက“ကျားဖြူမကော” လို့ မေးသည်။ ရှယ်လီ က …“မျောက်သွေးနဲ့ ရမ် စပ်နေတယ်” လို့ ပြန်ဖြေတော့ ရှမ်းလေး သဘောကျနေသည်။
ကျားဖြူမသည် သစ္စာဖေါက်သော ရှယ်လီ့ကို ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့တာတွေ ဆဲနေသည်။ ရှယ်လီက သူမ တပည့်တယောက်ကို ကျားဖြူမပါးစပ်ကို အဝတ်ဆို့ခိုင်းလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန့် တမျက်နှာထဲနဲ့ ဒါတွေ လုပ်နေတာ။ မာန်ဟုန့်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ သူမရှေ့ရေးကို ထည့်မတွက်ဘဲ လိုက်လုပ်ပေးနေတာပါ။ ဆုံရပ် ဖြစ်တဲ့ သေမင်းတောင်ကုန်းဆီကို ခရီးပြင်းနှင်နေကြပြီ။
ရှမ်းလေးသည် ချောင်းထိပ်ရွာမှာ ကျားဖြူမနဲ့ ဝစ်စကီသောက်ခဲ့တဲ့ အရှိန်နဲ့ စခန်းအပြန် ဒယိမ်းဒယိုင် ဖြစ်နေသည်။ စခန်းပြန်ရောက်ရင် … ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်ကို ရအောင် ကျင့်မည်လို့ စိတ်ထဲ ကြုံးဝါးနေသည်။ သူတို့စခန်း ဝင်ခါနီး သူ့ကင်းအဖွဲ့ကို မတွေ့။ လက်ခေါက်မှုတ်လဲ ပြန်အသံမပြုဘူး။
“စစ်ကျန် … စက်နဲ့ ခေါ်ကြည့်စမ်း . .”
ကျားဖြူမကို မရှယ်လီ ခေါ်သွားတာလဲ ရှမ်းလေး စိတ်ထဲမှာ သဘောကျနေသည်။ ကျားဖြူမ ရှိနေလို့ ဝင်ဒီတို့ကို သူ အတင်းကြမ်းဖို့ မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့တာ။
“ခေါ်လို့ မရဘူး … ” “ဟေ … ကင်းသမားတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ …” “တခုခုတော့ ဖြစ်နေပြီ … စစ်ကျန် …” “ဟာ … ကင်းသမားတွေ သေနေတယ် … ” “ဟေ … ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ …”
စခန်းက စက်နဲ့ ခေါ်ပြီ။ ဝင်ဒီနဲ့ မဟန်တို့ မရှိတော့ဘူး … မရှယ်လီနဲ့ ပါလာတဲ့ နန်းကြာနဲ့ အဖွဲ့လဲ မရှိတော့ဘူး … ကွန်းလုံလဲ သေနေတယ် … အချုပ်ခန်းစောင့် ခမ်းသီလဲ သေနေတယ်ဆိုတာ သတင်းပို့သည်။ ဟား …မရှယ်လီ … သစ္စာဖေါက်ပြီနဲ့ တူတယ်။ “ဟာ … ဒါဆိုရင် … ကျားဖြူမလဲ ခံရပြီလား မသိဘူး …”
ရှမ်းလေးလဲ စခန်းထဲက ကျန်တဲ့လူအားလုံး လိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောပြီး … နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကာ မရှယ်လီတို့နောက်ကို လိုက်လေသည်။ မကြာခင် ခပ်ဝေးဝေးက အတွဲလိုက် ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ သေနတ်သံများ … ကြားရသည်။ သူ့စခန်းက ထွက်လိုက်တဲ့ လူတွေနဲ့ ဝင်ဒီတို့ကို ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့ နန်းကြာတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီ ထင်တာဘဲ။ သေနတ်သံကြားတဲ့ဘက်ဆီကို ဦးတည်ပြီး လိုက်သည်။ အုန်းကနဲ ပေါက်ကွဲသံကြီးတခု ကြားလိုက်ရပြန်သည်။
မာန်ဟန်တို့လူစု တဖြေးဖြေးနဲ့ တောင်ကုန်းလေးတခုပေါ် တက်ခဲ့သည်။ နန်းကြာက … သေမင်းတောင်ကုန်းဆိုတာ ဒါဘဲ. …လူတွေ့ရင် စွတ်မပစ်နဲ့ ဆရာမရှယ်လီတို့ ဖြစ်နေမယ် … ဒီမှာ ဆုံဖို့ ချိန်းထားတာ … ” လို့ ပြောသည်။ နန်းကြာက ချိုးကူသံလို အသံပေးကြည့်လိုက်သည်။ ဘာသံမှ ပြန်မကြားသေး။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက သစ်ပင်မြင့်တွေပေါ်က မျောက်အုပ်တွေ တကွီးကွီးအော်သံတွေဘဲ ကြားနေရသည်။ မဟန်က … “ကိုမာန်ရေ … ကျေးဇူးတင်တယ် … ကိုမာန်ကို ဘယ်သူတွေ ကူလဲ … ခွန်ထွန်းမောင်ကော … ” လို့မေးသည်။
“ခွန်ထွန်းမောင် သစ္စာဖေါက်တယ် … ဒီကောင်က ရှမ်းလေးဘက်က … ” “ဟေ … အခု ဒီကောင်ရော …” “ကျနော့်ကို နှစ်ပေါက်တပေါက်ရိုက်ပြီး ရှမ်းလေးလက် အပ်မလို့ လုပ်တာ … ကျနော် ရှင်းပစ်လိုက်ပြီ … ” “ဟာ …မာန်ကတော့ ပိုင်တယ်ဟေ့”
ဝင်ဒီက သဘောကျသွားပြီး မာန်ဟန့်ခါးကို ဖက်လိုက်သည်။ နန်းကြာက ချိုးကူသံ ပေးပြန်သည်။ ဒီတခါတော့ ခပ်ဝေးဝေးက ချိုးကူသံ ပြန်ပေးတာ ကြားလိုက်ရသည်။
“ဟော … ဆရာမ ရှယ်လီတို့ ထင်တယ် … သတိတော့ထား … ဟေ့ … ဂျိုတင်းနဲ့ ဆိတ်လေး … ရှေ့တက်ကြည့်စမ်း … ဆရာမတို့ မဟုတ်ဘဲ ရန်သူ ဖြစ်နေမယ် … မသေချာဘဲ ဘာမှ မပစ်နဲ့နော …”
နန်းကြာနဲ့အဖွဲ့ သေနတ်များကို ထိုးချိန်ကာ ဖျတ်လပ်စွာ အရှေ့တက်သွားကြသည်။ ဝင်ဒီသည် ဖျတ်လပ် တောကျွမ်းတဲ့ နန်းကြာကို ကြည့်ကာ သဘောကျနေသည်။ ဟိုးတုံးက သူမ ဒီနယ်မြေမှာ ကျင်လည်ခဲ့စဉ်က နန်းကြာလို ကောင်မလေးတွေ ဝင်ဒီ အများကြီး တွေ့ခဲ့ဘူးသည်။
“မာန် …” “ဟင် … ဘာလဲ … မ” “နန်းကြာက ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ … ရှယ်လီဆိုတာက ဘယ်ရှယ်လီလဲ …မာန်နဲ့ တိတ်တိတ် ညိခဲ့တဲ့ မယ်ဆိုင်က ရှယ်လီလား …”
မာန်ဟုန် ဒိုင်းကနဲ ထူပူသွားသည်။ သူ့မျက်နှာသည် ဒီအချိန်မှာ နီမြန်းနေလိမ့်မည်လို့ မာန်ဟုန် ထင်သည်။ သူနဲ့ ရှယ်လီ ညိခဲ့တာတွေ ဝင်ဒီ မသိဘူးလို့ သူ ထင်နေခဲ့တာ။ ဝင်ဒီသည် ဒါတွေ သိရက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တာဘဲကိုး။
“ဟုတ်တယ် …မ … သူက ဗိုလ်ခွန်မိုင်းဆိုတဲ့ ကောင်နဲ့ ရနေတယ် …ရှယ်လီက မနဲ့ မဟန်တို့ကို ရှမ်းလေး ဖမ်းထားတယ် ဆိုတာ သိရတာနဲ့ မာန့်ကို လာဆက်သွယ်ပြီး မတို့ကို ခုလို လာကယ်ထုတ်ဖို့ လုပ်ပေးတာဘဲ …” မဟန်က … “ဒါဆို ရှယ်လီလဲ အခု သူ့လင်ဆီ ပြန်လို့ ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲ … ကိုမာန် …” လို့ ပြောသည်။ ဝင်ဒီက “အင်း … ရှယ်လီက သူ့ဘဝ အဆုံးခံပြီး မာန့်ကို ကူတာဘဲ … မတို့ ခုလို လွတ်လာတာ ရှယ်လီ့ကြောင့်ဘဲ … ရှယ်လီ့ကိုလဲ ဒို့ အပါခေါ်သွားမှ ဖြစ်မယ် …” လို့ ဝင်ပြောသည်။
“ဟော … နန်းကြာ … ဟိုးရှေ့မှာ … တွေ့နေကြပြီ … ကဲ … ဟိုမှာ …ရှယ်လီ …”
ရှယ်လီသည် မာန်ဟုန်တို့ ဆီကို ပြေးလာသည်။
“ကိုမာန် …အားလုံး အဆင်ချောတယ် နော …” “အိုကေတယ် …ရှယ်လီ …ဒီမှာ … ဒါ … ဝင်ဒီ … ဒီဘက်က မဟန် …” “ဝမ်းသာတယ် … အမတို့ကို တွေ့ရတာ . .” “အစစ အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် …ရှယ်လီ … ”ွင် “ရတယ် အမ … ” “ရှယ်လီက မြန်မာစကား အရမ်းမွှတ်သွားပြီ နော် … ”
ရှယ်လီက ပြုံးသည်။ အမ်၁၆ မောင်းပြန်ကို အသင့်အနေအထား ချိန်ကိုင်ရင်း ရှေ့က သွားနှင့်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နန်းကြာတို့ အနောက်ကို လိုက်ရန်ပြင်သည်။
“ကဲ အနောက်က ရှမ်းလေးတို့ လိုက်လာနေပြီ … ရှယ်လီတို့ … အပြင်းအထန် လစ်ကြမှ ဖြစ်မယ် … ”
နန်းကြာက လမ်းကျွမ်းသူမို့ ရှေ့က ဦးဆောင်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ် တောတိုးလေပြီ။ သူတို့ကား ရှိနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက ရွာကြီးဆီကို အရောက် ဖြတ်လမ်းတခုကနေ သွားကြရမှာ။
“ကျားဖြူမ ဆိုတာ ဟိုဟာဘဲ … ရှမ်းလေးရဲ့ ကောင်မ … ”
ရှယ်လီက လက်ပြန်ကြိုးတုတ် … ပါးစပ်ကို အဝတ်ဆို့ထားတဲ့ ကျားဖြူမကို မာန်ဟန်တို့ကို ပြသည်။ ကျားဖြူမသည် လက်ပြန်ကြိုး အတုတ်ခံထားရလို့ လမ်းမြန်မြန် မလျှောက်နိုင်။ ရှယ်လီရဲ့ တပည့်တယောက်က ကျားဖြူမရဲ့ လက်မောင်းကနေကိုင်ကာ ဆွဲခေါ်ပေးနေသည်။ ရှယ်လီ့ခါးမှာ ချိတ်ထားသော ကျားဖြူမရဲ့ လမ်းလျှောက်စကားပြောစက် အသံမြည်လာသည်။ ရှမ်းလေးရဲ့ အသံ။ ရှယ်လီက ရှမ်းလေးကို နောက်က လိုက်မလာဖို့ ပြောသည်။ လိုက်လာရင် ကျားဖြူမကို သတ်ပစ်မည် … လို့ ပြောလိုက်သည်။ ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲရေးတိုင်းထွာလိုက်သော ရှမ်းလေးရဲ့အသံ ကြားလိုက်ကြရသည်။